ED Recovery Stories5- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery Stories5သည်အကောင့်တိုတောင်းသောစာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မလိင်စိတ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ပထမဆုံးအော်ဂဇင်ကငါအသက် ၁၄ နှစ်မှာပေါ့ ကြောင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခါ porn ကိုကြည့်။
ငါနမ်းခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမိန်းကလေးကငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာဖြစ်ပြီး၊ အသက် ၁၆ နှစ်မှာထူးဆန်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးအပိုဆုကြေးမရခဲ့ပါဘူး။ အစအ ဦး မှာအင်တာနက်မရခဲ့ရင် တိပ်ခွေတွေ၊ ဒီဗီဒီတွေကို ၀ ယ်ဖို့၊ ဒါပေမဲ့ဒီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုများသောအားဖြင့်သင့်အားအင်တာနက်ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောအတွေ့အကြုံများပေးလေ့မရှိပါ။ ဥပမာ - သင်၏ fetish သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မျက်နှာပေါ်တွင် cumming ဖြစ်လျှင်၊ internet ရှိပါကမြင်ကွင်းသို့သွားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ကိုခံစားရသည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်မရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကျွန်မရဲ့ပုံပြင်ကိုဆက်ပြောနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုငါနမ်းတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကျွန်မဟာအပိုဝင်ငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် (မသိသောမိန်းကလေးနှင့်အတူ) ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစိတ်ဒဏ်ရာရရှိပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်ရည်းစားတစ်ယောက်ရခဲ့သည်။ သူမနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံမှာလည်းမအောင်မြင်သော်လည်း၊ ) ဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များမှာကျွန်ုပ်ထိုးဖောက်သောအခါ cummed ခဲသည်၊ များသောအားဖြင့်အလုပ်ကိုကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်ရသည်။ အဲဒီနောက်မှာငါကျောင်းသင်ရတာခက်ခဲပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့အချိန်သိပ်မများတဲ့အတွက် Med ကျောင်းမှာအခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သည်ကျွန်ုပ်သည် Bonner ကိုရနိုင်သော်လည်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါ (၁ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ်) ခဲခဲသည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၂ နှစ်ရောက်သောအခါအခမဲ့ xvideos များတိုးပွားလာခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်သွားပြီးအလွန်အစွန်းရောက်လိင်အခြေအနေများကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ မင်းစိတ်ကူးကြည့်လို့ရရင်ငါစိတ်ဒဏ်ရာပိုရစေတယ်။ ငါနင့်မိန်းကလေးများကိုနမ်းနေသည့်အချိန်၌ပင်ဘောနပ်စ်မရှိခဲ့ပါ။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေများအရ၊ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသည့် ၁၀၀% သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်ပြီးငါ ED ရှိလို့အမျိုးသမီးများနှင့်အခြေအနေများကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်မအသက် ၂၆ နှစ်ပြည့်တဲ့အထိညစ်ညမ်းမှုကိုငါ့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းလို့သံသယဝင်လာတယ်။ ငါရေချိုးခန်းထဲမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါကျွန်တော်မတတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်နိုင်သည့်အခါညစ်ညမ်းသောမြင်ကွင်းများကိုမြင်ယောင်ကြည့်မိသည်။
ငါကမိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ Viagra ကိုတောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး (ဒါက porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ erectile dysfunction (PRED) ပုံမှန်အတိုင်းပါ။ ) လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လလောက်ကတည်းကငါဟာ porn ကိုမကြည့်တော့ဘဲမကြာခဏထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုယုံကြည်စိတ်ချသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အလွန်စွဲကပ်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖြတ်ရန်ခက်ခဲနေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်အခြေအနေများပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။5ရက်အကြာကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုငါ့ထံသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ငါ့မှာ“ တကယ်ခက်ခဲတဲ့” အညွန့်မရှိခဲ့ပေမယ့်ငါပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါအလုပ်ပြီးအောင်ငါ့လက်တွေလိုတယ်။ ကောင်မလေးကပိုလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမရခဲ့ဘူး PRED ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာငါပြောနိုင်တာက -
နေ့ 48- ငါအံ့သြ Wow ခံစားရတယ်.
ငါဘယ်လောက်အထိခံစားရတယ်ဆိုတာကိုစကားလုံးတွေကဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ ငါသည်ငါ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်အများကြီးခံစား! ငါဆိုအနုတ်လက္ခဏာ Self- ဟောပြောချက်တော့ဘူး! ထိုအခါငါရက်ပေါင်းစွမ်းအင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ယုံကြည်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ အမျိုးသမီးများကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိလာသည်။
အင်္ဂါနေ့မှာကြက်နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကောက်ယူလိုက်တယ်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး နှင့်အတူထွက်လုပ်ခဲ့သည်။ နံပါတ်တစ်ခုပိတ်လိုက်တယ် ငါနဲ့သူမစကားပြောနေတယ်။ သူမသည်သူမကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်မဂရုမစိုက်သည့်ပုံပေါက်သည်ကိုသူနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမကစားစရာများစွာကစားသောကြောင့်သူမလမ်းမှထွက်ခွာသွားသည့်အချက်တစ်ချက်ပင်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားသောအရာများကိုဂရုမစိုက်ဟုခံစားမိသည်။ ဒါဟာသင်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားပျော်မွေ့ဖို့ချခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်သင်၏မ။ ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏နေအိမ်သို့တက်သွားပြီးသူ့ကိုရိုက်နှက်ကာကျွန်ုပ်၏နံပါတ်ကို lol ကလက်ခံခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ရက်အနည်းငယ်စုံတွဲအကြာအတူတူကလပ်သို့သွား။ အားလုံးတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအပေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဤမျှလောက်သံလိုက်။ ထွက်လုပ်အပေါင်းတို့နှင့်ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ။ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တွင်ကျွန်ုပ်ချိန်းတွေ့ခဲ့သောမိန်းကလေးငယ်မှစွမ်းအင်ခံစားခဲ့ရသောပထမ ဦး ဆုံးအနမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တယ် ငါတို့အချင်းချင်းစိတ်ဓာတ်ကျနေသလိုခံစားရတယ်။
မနေ့ကငါကလပ်သို့သွား၏ ငါကြက်တစ်ကောင်အတွင်း၌ရောက်ရှိခဲ့သည့်ဒုတိယအကြိမ်ကငါ့ကိုလိုချင်သကဲ့သို့ငါအရမ်းကိုခဲယဉ်းနေသည်။ ငါသူနှင့်စကားပြောပြီးသူမမှာရည်းစားရှိခဲ့တယ် သို့သော်သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားလိုချင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကသူမသည်ငါ့အဝတ်အစားများကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုသည့်ပုံစံအတိုင်းပင်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ထံမှဝေးလမ်းလျှောက် အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သူမကသူမကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့နောက်ပြောင်နေတဲ့လှောင်ပြောင်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုထားခဲ့တယ်။ မင်းမှာရည်းစားရှိရင်ဟေ့ငါ့ကို DTF မျက်လုံးမပေးနဲ့။
ထိုအခါအဲဒီမှာကခုန်ငါ့ထံသို့လာမယ့်ရပ်နေတဲ့ကြက်ကြီးနဲ့ကျွန်မသူမ၏တဝါကျကဆိုပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်ငါ့ကိုကျော်ကခုန်တော့တာပဲ။ ငါတို့သည်ချိတ်ဆက်။ သူမ၏အရေအတွက်ကိုတယ်
ထိုအခါငါသည်အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးစကားပြောစတင်ကျွန်တော်ထွက်အောင်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါထွက်ထောက်ပြချင်ပါတယ်: ငါ MY တစ်ခုလုံးကိုဘဝကျပန်းယင်းနှင့်အတူထွက်မြားဖှဲ့ဖူးဘူး။ တစ်ဦးတည်းနှစ်ဦးသည်တစ်အပတ်စေ !!!
အဆိုပါနမ်းဒါလှပသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးသည်သံလိုက်ခံစားရတယ်။ သူမသည်ပင်လမ်းမှတဆင့်ဝက်ရပ်တန့်နှင့်နမ်းဒါမော်ကွန်းကြောင့်ညညျးတှားခွငျးမြားနှငျ့နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူစတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သုံးကြိမ်တူသောထွက်စေတော်မူ၏။ သူမ၏အရေအတွက်ကိုတယ်
သူမထင်သလိုခံစားရတယ်၊ သူမကလွယ်တယ်လို့သူထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်မဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါအနမ်း soooo မော်ကွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
(ငါအကြံဥာဏ်တချို့လိုတယ်။ သူမကလွယ်လွယ်လေးပဲ (သို့) slutty လို့ထင်ပြီးသူမနောက်ကိုဆုတ်ခွာချင်ခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါကလပ်ကိုခေါ်ပြီးရယ်စရာအသံစာတစ်စောင်ထားခဲ့တယ်။ သူမငါ့ကိုပြန်မရိုက်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းတာလားငါတကယ်သူမကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးသူမငါ့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်
ငါကောလိပ်ကနေပြောခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကသူနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ သူမဟာကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအဖော်ဖြစ်တယ်လို့ငါခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်ရှာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တဖန်နှင့်သူမ၏ကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေဘယ်တော့မှ ... ..
ဒါပေမယ့် wow ငါလွနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းသီတင်းပတ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုမည်သူမဆိုနှင့်အတူဤသံလိုက်ရှိနိုင်ပါသည်ဒီခံစားချက်ရှိသည်။
ငါမရှိတော့လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးကိုကြည့်။ သူတို့တော်တော်လေးသို့မဟုတ်မဖြစ်ကြပါလျှင်သကဲ့သို့ငါကသူတို့ကိုကြည့်ပါ။ လွင်ပြင်နဲ့ရိုးရိုး။ သူတို့ထဲကဘယ်သူမျှမကပုံရိပ်တွေငါ့ကိုသို့မဟုတ်ဘာမှ sexing ။
ငါသူတို့ကဒီအပေါ်ကောက်နိုင် 100% သေချာဖြစ်၏။ ငါဟာချိုတဲ့ခွေးလိုမခံစားရဘူး၊ ငါနဲ့အတူငါနဲ့အတူအိပ်စက်ရမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကိုအသုံးချရမယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ ယင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီကိုပျော်မွေ့စေလိုသည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်။
ငါသည်လည်းအရာရာကို“ ခံစား” နိုင်သည်။ ငါစောစောစီးစီးပြန်စတာကိုဒီတခေါက်မြင်ကွင်းကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့ပိုပြီးသိမ်မွေ့သွားတယ်။ ငါဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါကမ္ဘာသစ်ထဲဝင်နေသလိုခံစားရတယ် အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ခံစားနေရကြောင်းဖော်ပြချက်ကိုသူတို့က Neo လိုမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ငါလုံးဝဆက်စပ်နေတယ်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပစ္စည်းပစ္စယကွီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငှာကွိမျထကောက်နေယခု sooooooo လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီတော့လွယ်ကူပါတယ်။
ဒီအပေါ်ကိုသွားခဲ့ပြီးအရာကိုပဲအလွန်သေးငယ်တဲ့အတိုအထွာဖြစ်ပါတယ်။ ငါဤမျှလောက်များစွာသောနံပါတ်များကိုစုဆောင်းခဲ့ကြပြီးငါပြုဤမျှလောက်အလုပ်၎င်း၏ရယ်စရာဆည်းပူးကြသည်။ ငါကွမ်တမ်ခုန်သကဲ့သို့ငါခံစား!
ကျွန်တော့်မိန့်ခွန်းကိုထိန်းချုပ်ရတာအံ့သြစရာပဲ။ ငါအခုဘယ်တော့မှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာမရှိဘူး၊ ငါ့ကိုအဟောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ငါခွေးလိုခံစားရတယ် ဒီလူကိုငါလုံးဝမခံစားရတော့လို့“ အိုငါ့ကို” လို့တောင်မပြောနိုင်ဘူး။ ငါအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ရောဂါကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါလူတစ်ယောက်လိုခံစားမှုပိုခံစားရတယ်။
ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသင်ရုန်းကန်နေရသောလူတိုင်းအတွက်၊ မင်းကိုမေးနေပါတယ်။ PMO ကိုရပ်ပါ။ ဒါဟာအလွယ်တကူငါအစဉ်အမြဲငါဘဝ၌လုပ်သောအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်ပြန်မလာနှင့်ရုန်းကန်တော့ဘူး။ ရပ်လိုက်ရုံပဲ
ငါရက်ပေါင်း 60 ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါစတင်နှင့်ခက်ခဲအချိန်ရှိခြင်းယောက်ျားတွေများအတွက်အချို့သောကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိခဲ့အလိုရှိ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုတွင်ရှိခဲ့သည် (ငါတို့စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလျှင်ထပ်မံရှိကောင်းရှိနိုင်သည်), ဒါပေမယ့်ငါ porn ကိုရပ်တန့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ငါ့ကိုလှုပ်ဖို့ကွာရှင်းယူ။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှအဲဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူး
အခုငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတုန်းပဲ။ တစ်နေ့ကိုအကြိမ်များစွာပဲ။ ငါဒီဇင်ဘာလအတွင်းကရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်ငါ့ ED နှင့်အတူကူညီပေးသည်ရှိမရှိကြည့်ရှုပါ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်၏တိုက်တွန်းချက်များမှာမဆိုးလွန်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်ထိုတွင်ရှိနေသေးသည်။ သူတို့ပေါ်လာတဲ့အခါငါဒီ subreddit ကိုချက်ချင်းလာတယ်။
အမှုအရာပိုကောင်းရပေမယ့်ဖြည်းဖြည်း။ အကြှနျုပျ၏ ED နောက်တဖန်နီးပါးငါ့အဟောင်းများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ရံဖန်ရံခါပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်အတူပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနှစ်များတွင်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုလာမယ့်နွေရာသီများကနောက်ကျောကပုံမှန်မှဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါကြည့်ရတာအချိန်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်များစွာကုန်လွန်နေသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ED နှင့်အခြားပြissuesနာများဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြaနာဖြစ်ခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုကျွန်ုပ်၏ဇနီးအပေါ်အာရုံစိုက်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ မနေ့ညကကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးပြီ။ အရမ်းမိုက်တယ်။ ထိုသို့အင်္ဂါနေ့ညဥ့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်မှစပြီးမကြာမီအင်္ဂါနေ့ညညတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟုမသေချာပါ။ တစ်ချိန်ချိန်အားလပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် သို့သော်အင်္ဂါနေ့လိင်သည်ငါတို့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်။ မျှဝေချင်တယ်
porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ abstinence ၏ 90 ရက်ကြာကာလပြီးနောက်ကျွန်မသတိထားမိ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံခဲ့, ငါငါ့ကိုချိုစေဖို့အခြားလှုံ့ဆော်မှုမလိုအပ်ခဲ့ဘူးကြောင်း။ ဒါ့အပြင်သုတ်ရည်ယိုစိမ့်တော့တယ်။ ငါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိမ်နှုန်းနည်းနည်းနဲ့ငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွင်းမှာသူတို့နဲ့အိပ်ရာဝင်ခဲ့ရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားအသစ်နဲ့ရင်းနှီးမှုရခဲ့တယ်။ ငါ (၁၂ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော) ကတိကဝတ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရင်း၊ ငါခဲယဉ်းစွာပြေးနေပြီဟုမဆိုလိုပါ၊ ခိုင်မာသောကျောက်တုံးမဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်စေရန်လုံလောက်သည် ကျွန်တော့်မိန်းကလေးကခေါင်းကိုပေးလိုက်တယ်။ ငါအဆက်မပြတ်ထိတ်လန့်သောအခါငါမပြုခဲ့အရာအားလုံးခံစားရတယ်။ ငါလာတဲ့အခါငါတစ်စက္ကန့်မှောင်မိုက်နဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ဒါအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအရမ်းကျိန်ဆဲတော့သူမရယ်တယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါနဲ့ဒီကောင်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ယောက်ျားတွေ…အားကြီးနေပါ…။ LINK
2 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ပြန်လည် ED ။ တိုးတက်မှုကို။
ငါအောင်မြင်စွာလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်တစ်လ nofap ပွုပါပွီ။ ဤ (ED) ငါ၏အပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လုံလောက်သောကြီးနဲ့ကျွန်မတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် fapping, ငါ၏ဘဝနှင့်အတူဆက်လက်။ ဘဝမှာမှောင်မိုက်ကာလပြီးနောက်ငါသည်ကိုယ်ပိုပိုပြီး fapping တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတစ်ဦး gf ရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်လိင်တက်ကြွနေကြသည်မရှိ FAP လွယ်ကူသော mode ကိုလုပ်နေတာနေပါတယ်။ Reading တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများကယ့်ကိုငါ့အဘို့လှုံ့ဆော်နေကြသည်ငါသည်ဤအသိုင်းအဝုိင်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေချင်တယ်။
ဒီ subreddit ရဲ့တရားသေအယူဝါဒအားလုံးကိုငါမယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကလူတိုင်းကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ငါမြင်နိုင်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောပန်းတိုင်များကိုလက်တွေ့ကျသောရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ များပြားကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပူစရာမလို၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရပ်များအပေါ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ ငါဖုံးကွယ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးသကဲ့သို့ငါတကယ်လွတ်မြောက်ခံစားရတယ်။ ငါကပိုစွမ်းအင်နှင့်မောင်းနှင်မှုရှိသည်။ အခုတော့ငါအပြင်ထွက်ပြီးလူတွေကိုတွေ့ရမယ်။ သူကပြောတယ်ဂုဏ်ယူလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ပြချင်တယ်။ အဲဒါကိုမာန်မာနကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုငါတကယ်ဝမ်းသာတယ်။
ငါဒီတစ်ပတ်မှာအကြိမ်များစွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ငါစဉ်းစားပြီး Nofap ကငါ့ ဦး နှောက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။
N ကို Be စေရန်ကောင်းမွန်သောဒါဟာခံစားရormal!
သင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုနမ်းနေစဉ်သူမ၏အဝတ်အစားများပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်ကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အချိန်၌သင်၏ခြေထောက်များကြားရှိခံစားမှုသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့မရသေးသောထိုသူများအတွက်သော့ကိုကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပို့စ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဘာမှအရေးမကြီးဘူး။
သငျသညျဆဲလူရှုပ်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်သော့ချက်ကြောင့်လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းမှီခိုဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်! ဒါကြောင့်သင်ကသင်တကယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်သင်ချင်တယ်။ အခြားသော့ချက်မှာအမျိုးသမီးများကိုလှည့်စားရန်ရှာထွက်ရန်သာဖြစ်သည်။ မင်းကြောက်တယ်လား တစ် ဦး fuck ဆိုတဲ့ pussy ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရုံလုပ်ပါ။
ငါသည်ဤအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခင်မှာ, ငါစိုက်ထူနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းခဲ့သည်။ ငါ porn ကနေလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများပို။ ပို။ လိုအပ်နေခဲ့ပြီးအဲဒါကိုကူညီပေးနေမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါတပြင်လုံးကိုအရာများအတွက်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်လာပြီခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်လောက်ပိုဆိုးလာတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကကျွန်ုပ်ကို porn သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာအောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါနက်ရှိုင်းလာပြီစောင့်ရှောက်နိုင်ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်း။ ဆိုလိုတာကတော့ကလေးညစ်ညမ်းမှအပကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ ငါ့ကိုကြောက်လန့်တာကငါလည်းဒီနေ့ငါသွားပြီလား။ အခုတော့ငါဘယ်တော့မှသိတော့မှာမဟုတ်ဘူး ငါအနည်းဆုံးကြောင်းများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။
ငါညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မပါဘဲသွားလေလေ၊ ဟားဟား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနားပေးရမယ့်အရှက်ရစရာတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ခါရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသင် porn နဲ့ masturbation ကနေဝေးဝေးနေရင်မင်းရဲ့လိင်ဆန္ဒကမြင့်တက်လာမယ်လို့ပြောဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ။ ဒါဟာကောင်းသောလမ်းအတွက်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အိုကေ၊ ဒါကပြန်ဖတ်ရတာရယ်စရာကောင်းတယ်။ အဲဒီလိုမဆိုလိုပါဘူး - မကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်း။ ဒါဟာလေးနက်သောခေါင်းစဉ်များနှင့် touchy ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသိတယ်။
ဒီနေ့နိုးလာတဲ့အခါ wow လိုပဲ ဤသည်စိုက်ထူအရင်ကထက်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါကအထွတ်အထိပ်င်ထင်အခါတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာတစ်လပြီးတစ်လပိုခက်လာတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာအထွတ်အထိပ်ရောက်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီလဟာ ၉ လရဲ့အစဖြစ်တယ်။ ကြိုးစားနေ Bros ထားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ မအောင်မြင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အရှုံးမပေးပါနှင့်။ ဒီ shit က ၁ နှစ် ၂ နှစ်လောက်ကြာမယ်ဆိုရင်ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအလင်းကိုမြင်နိုင်ပြီးငါဆက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။
ကောလိပ်၌ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထုတ်ယူနေစဉ်လုံးဝစိုက်ထူနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ငါဘာမှားနေလဲမသိဘူး၊ ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အတူရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏ PC ကြွက်သားများကိုအပြည့်အဝမလျှော့နိုင်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အတော်လေးလွယ်ကူစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်၊ များသောအားဖြင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအကူအညီဖြင့်မကြာခဏပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်လောက်ကစပြီးညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်လိုက်တယ်။
အခုငါ ED မဆိုသဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုရှိပြီးအားအင်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သောရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ထူမှုများရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးတွေမှာ ၀ တ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေတောင်မှငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်! အဲဒါကိုယုံဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သမျှကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ဒါဟာလုံးဝကျိုးနပ် soooo ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှနောက်တဖန်မလုပ်သင့်ကြောင်းမဆိုလို။ ငါသမင်လေ့ကျင့်ခန်းသည်နံနက်ယံ၌ထရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းလုံးဝမရှိတော့ပါ။ လက်ရှိနှင့်အေးအေးဆေးဆေးနေပါ။ ချစ်ခင်ကြင်နာသောမိတ်ဆွေနှင့်အတူပါ။
(တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား) ငါ“ rebooting” စလုပ်ကတည်းကတစ်ပတ်လောက်ကြာပြီ။ သေချာတာတစ်ခုသတိထားမိတာကတော့စိုက်ထူမှုတိုးလာတာပဲ - ငါသူတို့ကိုနံနက်တိုင်းရပြီ၊ သူတို့ကခဲယဉ်းတယ်။ ငါအိပ်ပျော်ဖို့စောင့်နေတဲ့ညတွေတော်တော်များများမှာငါ့အတွေးတွေတုန်ခါသွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မထိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုက်ထူနိုင်တာကိုသတိပြုမိတယ်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကပင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ငါ ED ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီမနက်မှာငါနဲ့အတူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါလိုချင်ရင်စိုက်ထူမှုကိုရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်! ကျွန်တော့်အတွက်အမြဲတမ်းပြသနိုင်တဲ့ကွန်ဒုံးနဲ့တောင်မှ။
ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း။ porn နှင့် ED အကြားဆက်စပ်မှုမှာမရှင်းလင်းနိုင်ပါ - ED ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်နေရာကမှမထိမှန်စေဘဲကျွန်တော့် psyche ကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောလက porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးနောက်အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အခါမျှပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုမျိုးမရှိခဲ့ကြောင်းပြောရလျှင် ၀ မ်းသာမိပါသည်။
yourbrainonporn = အလေးအနက်ထားမှန်! t ။ ငါ fap နေတုန်းပဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလုံးဝမကြည့်တော့ဘူး။ ငါအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာ narb ရဲ့ [အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ] ထပ်ခါထပ်ခါပေါ်လာတယ်။
ငါအသက် ၃၀ ကျော်ပြီ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ED ပြproblemsနာတွေလည်းကြာခဲ့ပြီ - အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းက၎င်းသည်စုစုပေါင်း ED copulatory ဖြစ်လာသည်။ ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအပေါ်အပြစ်တင်ပါတယ်။ (“ မင်းကိုမင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူး” /” မင်းကိုပိုပြီးတုန့်ပြန်မှုရှိစေချင်တယ်”)၊ မိတ်ဖက်များ၏အသစ်အဆန်း (“ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုဖမ်းစားရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအချိန်ပေးရန်လိုအပ်သည်”) ။ ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်၊ အစားအစာ၊ အသက်၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်…တကယ်တော့“ ငါမင်းကိုမင်းမသိဘူး” ဆိုတဲ့အချက် မှလွဲ၍ သူတို့အားလုံးကသရုပ်ဆောင်ဖို့နေရာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါသဘောပေါက်လာတဲ့အခါငါက porn မပါဘဲအော်ဂဇင်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး - တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်တယ် ဒါဟာယခု၏ယခုမျက်မမြင်သိသာပုံရသည်။
ငါကျိန်းသေဒီဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ၊ ကောလိပ်အားကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။ အကြှနျုပျ၏အခွအေနေကိုအခြားသူများအဖြစ်အစွန်းရောက်အဖြစ်ပါပြီမဟုတ် MY ပေမယ် porn နှင့်လျှော့ချတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ abstinence ကျိန်းသေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED နှင့်အတူကူညီပေးသည်။ အဆိုပါတိုက်တွန်းလွန်းကြီးစွာဖြစ်လာသည်လျှင်, သင်၏ဦးခေါင်း၌စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ masturbate ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နောက်မှငါပိုကောင်းခံစားခဲ့ရနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအိပ်ရာပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ porn အစဉ်အမြဲငါအပေါ်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီငါသောက် cigs နှင့်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းသွားပါ။
ငါသြဂုတ်လ 13th အပေါ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုတော့ဘူး။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မသာနှစ်ကြိမ် masturbated ပါပြီ။ ငါရည်းစားအသစ်နှင့်တစ်ပတ်အကြိမ်အကြိမ်များစွာလိင်ဆက်ဆံနေသည်။ porn သည်သွေးဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်းသင့်ကိုဘယ်တော့မျှပျော်ရွှင်စေမည်မဟုတ်ပါ။ မကြောက်ကြနှင့်၊ ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကုသပေးလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုခေတ္တရပ်တန့်ခြင်းသည်သင်၏လိင်တံကိုအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်သင်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကြီးအကျယ်မြန်စေလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားသော့ချက်ဖြစ်သည်။
ငါ ၄၁ နှစ်ရှိပြီ၊ ကွာရှင်းပြီးငါလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းစွဲစွဲလမ်းနေပြီ၊ အခုဆိုရင်ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်၊ တစ်လကို ၂-၃ ကြိမ်လောက်ကြည့်နေတုန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ယခုထားရှိပါ။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုတည်းသောဘဝကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုအတူတကွအသုံးပြုရန်အတွက်အထူးအမျိုးသမီးကိုရှာဖွေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစိုက်မှုတစ်ခုလုံးနှင့်သူမလိုချင်သည့်လိင်အားလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဟားဟား
မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူတော့လုပ်လို့မရဘူး။ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွှတ်ခွင့်၊ ငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအာရုံစိုက်မယ့်အစားသူမပျော်ရွှင်မှုကိုပေးချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရုစိုက်ရသည်မှာလွယ်ကူသောကြောင့်အခြားသူအားအော်ဂဇင်ပြုလုပ်ရန်“ ဖိအား” မရှိပါ။
နေ့ ၃၈ - (အခြားဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှအကြံဥာဏ်) ငါ muthaf ***** လိုမျိုသိပ်နေခဲ့ပေမယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တုန်းကကျွန်မရဲ့ဒစ်ကရုတ်တရက်အသက်ဝင်လာတယ်။ 🙂အပြင်ထွက်ပြီးထွက်သွားပါ။ အမျိုးသမီးကုမ္ပဏီနှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှများများနေပါ။ သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ် သင်ရုံလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌ညွှန်ပြရတယ်။ မင်းဘဝမှာမိန်းမလားဒါမှမဟုတ်မင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိလား။ ရုံ bro ထွက်ရ။
[အသက်အရွယ် 53] ကျွန်ုပ်ရရှိသောတစ်ခုတည်းသောအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အတူ“ ကစား” သောအခါ။ ငါ reboot မလုပ်ခင်နှင့် PM PM စွဲကပ်မှုကြောင့်ငါသူမနှင့်အတူရှိစဉ် Erectable type ကိုရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲခဲ့သည် - porn နှင့်ဆက်စပ်သော ED။ အခုငါမှာပြproblemနာမရှိဘူး၊ ငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးငါ့စိုက်ထူမှုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ပြီ။ ငါသည်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့သောအခါငါစိုက်ထူရပါသလား? မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ? ငါအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တိုင်းသူမအိပ်ရာပေါ်မှာသူမနဲ့တူမယ့်စိတ်ကိုတွေးနေတဲ့လိင်ဆိုင်ရာအရာတစ်ခုအဖြစ်မရှုမြင်တော့ဘူး။ porn ငါ့ကိုငါ့ထံသို့ပြု၏။ အမျိုးသမီးတွေဟာကျွန်တော့်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်လာကြပြီးတကယ့်လူတွေမဟုတ်ကြပါ။
ဒါကြောင့်ငါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့ရင်သူမအလှကိုခဏလေးစားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းပဲကြည့်ပြီးတခြားအရာတစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်တယ် - တပ်မက်တာမှလွဲရင် - ငါမိန်းမကိုကယ်တင်တယ်။ မင်းကယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာငါမြင်နိုင်တယ်။ သင်သည်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့သည့်အခါတိုင်းပိုမိုအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာမည်။ ငါ့အတွက်ဒါဟာအရေးမကြီးဘူး ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသောအရာမှာကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးသူအတွက်ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ are.I ဒီကသင်၏မေးခွန်းဖြေဆိုကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် P / M နေ့၏ ၃၃ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်မရှိပါ။ မနေ့ကငါအောင်မြင်စွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒီနေ့ဟာ ၂၈ ရက်မှာထိုးဖောက်တဲ့လိင်မှတဆင့်ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအထွfollowing်အထိပ်သို့ရောက်နေပြီအကယ်၍ မည်သူမဆို P / M မှထွက်ခြင်းသည်သင်၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခွဲခြားထားခြင်းရှိ၊ မရှိသံသယရှိပါက၊ တကယ်တော့အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကမှသာကျွန်ုပ်သည်သင့်လျော်သောလိင်မပါဘဲဘဝသို့နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ယခုငါမွေးဖွားလာပြီဟုခံစားရပြီးလူအများနှင့်လိုက်မီရန်အသင့်ရှိနေသည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်မည်မျှလိုအပ်သည်၊ သင်၏ဘဝ၏အရေးကြီးသောကဏ္ aspect ကိုပြုပြင်ရန်၎င်း၏သေးငယ်သောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ငါ့ထံသို့ပြေးရပြီ။
ဘုရားရေ !! .. ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ !! ငါယုံကြည်သလိုမဖြစ်နိုင်ဘူး !!
ဒီမှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေးဖို့ငါကြိုးစားနေတာပါ။ ငါဟာပုံမှန်လူတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးလိင်ကိစ္စမှာပျော်မွေ့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပါ။ 12 နှစ် p စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံ pmo အလေ့အထပြီးနောက်ခြိမ်းခြောက်အရေအတွက်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်, ငါကောင်းသောအဘို့အ asexual ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ တစ်ရက်မှာဆွေမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကလေးတစ်ယောက်ရဖို့အိပ်မက်တွေကိုမေ့ထားပါ။
တကယ်တော့ငါမှားခဲ့တယ် မျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိ။ မနေ့ကညမှာငါဟာအောင်မြင်မှုနဲ့အပြည့်အဝလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် (၈) နှစ်ကြာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၁၅ ရက်လုံးလုံး rewiring / rebooting လုပ်ပြီးနောက်မှာ p & mo ကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ ငါမြင့်မားသောဆွလိုအပ်နေ & အချို့သော PE ရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားအမှန်စင်စစ်ပျောက်ကင်းသည်ဟုဆိုရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာလိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၏အဆိုးဆုံးကာလမှလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းဤပြissuesနာများကိုအချိန်နှင့်အမျှဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါကအပြည့်အဝအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအသေးစိတျ၏ဝန်ရှိဂုဏ်နသောအပြည့်အဝအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်, ရေးသားဖို့နေဆဲအစောပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤအရပ်၌မျှော်လင့်ချက်လူတိုင်းပေးကမ်းခြင်း၌ရုံစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်ရုံ pied နှင့်အတူခံစားနေရပြီးထွက်လမ်းမရှိသောကယုံကြည်သည်ဆိုပါက, ငါသည်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းကြောင်းကိုရှိကွောငျးပြောချင်ပါတယ်။
မင်းမှာပြproblemနာရှိနေတယ်။ မင်းကိုရေးတဲ့ပုံကမင်းကမင်းကိုမင်းမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေစေတယ်။ ပိုကောင်းအောင်လိုချင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျော်လွန်နိုင်ရင်ဘယ်တော့မှစိတ်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ, သင်ကဲ့သို့တူညီသောပြsameနာရှိခဲ့ပါတယ်XACTLY အတူတူပင်။ porn ထံမှ ED ။ ငါလက် - အလုပ်သို့မဟုတ် blowjob မှလွဲ။ အဲဒါကိုထနိုင်ဘူး, ပြီးတော့ငါမိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့သာရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဘူး။
ငါကတက်ရဖို့စီမံခန့်ခွဲရင်တောင်ငါသည်လည်းရှိခဲ့ အချိန်မတန်မီသုက်ဒီတော့ငါ2သို့မဟုတ်3တွန်းကန်အားကြာရှည်လိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့လပေါင်းများစွာအပ်နှံခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းခံယူရတယ်၊ အခုငါမပျော်နိုင်တော့ဘူး။ ငါ ED နဲ့ Pre-E ကိုစပြီးကတည်းကတစ်နှစ်လောက်ပဲရတော့မယ်။ ရှေ့ဆက်မသွားမီသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများကိုကျော်ဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါသေးငယ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဖန်တီးရန်အကြံပြု, porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာမပါဘဲ3ရက်နှင့်အတူစတင်ရန်။ နောက်တစ်နေ့တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုချပါ။ ၄ ရက်သွားပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောလိုက်ရုံဖြင့်“ ငါဟာဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ကိုငါလုံးဝမတည့်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူး” ဟုသင်မပြောနိုင်သောအခါသင်စိတ်ဓာတ်ကျစေလိမ့်မည်! ဒါ့အပြင်သင်ရှုပ်ထွေးပြီးသင်မကျရောက်မီသင်ကိုယ်တိုင်မကောက်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်။ သင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူအနည်းငယ်မြင်သူထံမှလာသည်။
ဘာမှမဖြစ်နိုင်သောပါ! ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ကံကောင်းပါစေ။
Aaaand ... .90 ရက်ကငါ့ကို fixed !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NoFap (self.NoFap)
ဒါကိုစတင်ဖို့ - လူတိုင်းဟာစိန်ခေါ်မှုကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် - သူတို့ဟာသူတို့လို့မယူမှတ်ဘူးဆိုရင်တောင် စွဲ။ ငါကဒီအသုံးအနှုန်းအပေါ်လူတိုင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ အထက်တန်းကျောင်းမှာတောင် PMO စွဲစွဲလမ်းမှုကိုငါမပြောခဲ့ဘူး၊ ညတိုင်းငါကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါကောလိပ်တက်ပြီးသိသိသာသာလျော့နည်းသွားပေမယ့်တစ်ပတ်ကို ၃-၄ ကြိမ်လောက်လမ်းပြန်လျှောက်ခဲ့တယ်။ တောင်မှ ထို ငါ့ကို ED / PE combo ပေးရန်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ အတ္တအတွက်ပျော်စရာမရှိပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်ကောင်တာသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ရောက်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟုသတင်းပို့ရန်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအပြည့်အဝစိုက်ထူပြီးပြီဟုမခံစားရသော်လည်းအနည်းဆုံး ၈၀% + (နှင့်ပျော်စရာလောက်ရန်လုံလောက်သည် - D), ထိုကြောင့်ငါဆက်ပြော ဦး မည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ မတိုင်မီကျွန်ုပ်လုံးဝမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ အကြံဥာဏ်များအတွက်လိုအပ်သောမည်သူမဆိုကို ကျေးဇူးပြု၍ တုံ့ပြန်ပါ။
ok မနေ့ကငါ 8 ပတ် PMO မရှိဘဲပြီးသွားတယ်၊ ငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါ foreplay နှင့်လိင်တလျှောက်လုံးတစ်လျှောက်လုံးခက်ခဲနေခဲ့တယ်။ အားလုံး ၂၅ မိနစ်လောက်ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ငါ P ကိုအတွေးများကိုငါ့ခေါင်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြဘူးကိုယ့်ကိုယ့် c * ck အတွက်ခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
ငါ (61 ရက်) PMO မရှိဘဲစက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလ၏မြေတပြင်လုံးကိုသွားချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးညဥ့်ကျနော်တို့အတူတူအိပ်ရာများတွင်တစ်ဝှမ်းထားပါသည်ခဲ့ကြသည်ထိုသို့ 56 ရက်ပေါင်းမှာ coz အဘို့ကိုယ့်ကိုပါထင်ကောင်းစွာအဖြစ်ချမ်းသာစွာနေရမည်အကြောင်းနည်းပညာပိုင်းကြောင်း 8 ရက်သတ္တပတ် IS
အံ့သြစရာကကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အော်ဂဇင်ဟာစိတ်ပျက်စရာပဲ။ ဒါကကြာရှည်မခံခဲ့ဖူးဘူး။ ခြားနားချက်ကိုရှင်းပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါပြောနိုင်သည်မှာသင်သည်အော်ဂဇင်ရုံမျှသာရှိသေးသည့်အချိန်တွင်သင်ခေါင်းထဲဝင်လာသည်ဟူသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ ငါလာတဲ့အခါငါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါင်းနှစ်လုံးခဲ့တူသောဒါဟာထူးဆန်းပေမယ့်လုံးဝစိတ်ကျေနပ်မှုမခံစားရဘူး။ ၈ ပတ်အကြာမှာတော့ပုံမှန်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာမထင်ပါဘူး။ ငါကဒါဟာအစဉ်အမြဲငါဖူးအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ယူဆ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတာပြောဖို့စောလွန်းပါသေးတယ်။ ငါအရမ်း erotic ရှာတွေ့သောငါ့ ဦး ခေါင်း၌ porn flashbacks ရသေးသည်။ ငါ P နှင့် M, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှထွက်ခွာမည်။ ငါလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ရင် MI ကအာရုံခံစားမှုကိုသာလုပ်လိမ့်မယ်။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၉-၁၀ နှစ်အရွယ်ကွန်ပျူတာ၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောမိန်းမများကိုကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်စတင်ခဲ့သည် (အင်တာနက်သည်ယခုလောက်မြန်သည်မဟုတ်) ငါအထက်တန်းကျောင်းမှာတောင် ED တက်လာတာကိုမသိခဲ့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ porn အတွက်မကြည့်ခဲ့ရင်မဟုတ်ရင်ငါဘာလို့မိန်းကလေးမှငါ့ကိုနှိုးလို့မရဘူး။ ခဏကြာပေမယ့်နောက်တစ်ခါထပ်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါ iPod touch ကို (၁၈ နှစ်) ရောက်တဲ့အခါကျွန်မစွဲလမ်းမှုကအရမ်းဆိုးသွားပါတယ်။ သူတို့ဟာဓာတ်ပုံတွေတွေ့ခဲ့ရင်တောင်မိဘတွေဆီကစွဲလမ်းမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကပိုလွယ်ပါတယ် ငါစက်ရုပ်နဲ့ငါ "ကျိန်ဆို" ထားရှိမည်ငါနောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှပါ။
ငါစိုက်ထူခြင်းမရရှိမှီငါ cum နိုင်သည့်အချက်မှရတယ်။ ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးနဲ့အနိမ့်ဆုံးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လလောက်ကတည်းက၊ အခမဲ့ streaming porn site တစ်ခုမှာကောလိပ်လိင်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တောင်မကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော့်မှာအမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့တာကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ် မှာအားလုံးကမှပယ်လူရှုပ်။ အော်ဂဇင်၊ စိုက်ထူခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်း၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကျော်ကခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်နှင့်သွင်ပြင်ကိုမတွေ့ခင် ၁၀ ရက်အကြာမှာ ၆ ရက်လောက်မှာတောင်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၁၀ ရက်ကြာရုပ်ထွက်စကားပြောပြီးနောက် L-arginine ဆေးသောက်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွဲလမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ED ပြproblemနာကိုတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုလူမှုရေးအရနှင့်ဒေသများစွာ၌ပင်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
ငါပြန်စလုပ်ပြီးကတည်းက (၇၉) ရက်ရှိပြီ။ ငါ့အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်နံနက်သစ်တောများသည်မကြာခဏနှင့်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီ။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်ဆွဲဆောင်မှုနိယာမကိုကျင့်သုံးခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များမှာပိုမိုလေးနက်လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်လောက်က) ယခု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအသစ်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံကြသည်။ ငါသည်ငါ့လိင်ကိုပြသဖို့စတင်ခဲ့တယ်! အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူနေဆဲ @ 79% အစွမ်းသတ္တိ, မငါ့အအလားအလာအပြည့်အဝပြသနေဆဲမဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အဲဒီမှာလာပြီ! အနည်းဆုံး LOA ကြောင့်ငါ PMO ကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရိုက်နှက်နိုင်ခဲ့ပြီ၊ ယခုအခါအင်တာနက်ပေါ်တွင်အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများရှာဖွေနေသည်ဟူသောအတွေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Porn သွေးဆောင်မှု ED မဟုတ်လျှင်ယခုအချိန်တွင်အပျိုစင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်အရွယ်အပျိုစင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၌ဤညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ED ရောဂါနှင့်၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သောယုံကြည်မှုပြwasn'tနာများမရှိလျှင်လက်ရှိအပျိုစင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ငါအသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ သူမအိပ်ရာပေါ်မှာအဝတ်အချည်းစည်းရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမနေနိုင်တော့တဲ့အတွက်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ၁၇ နှစ် အဲဒီတွေ့ကြုံမှုကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းသွားစေပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဝေးရာကိုယူသွားဖို့အမြဲတမ်းကြောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုနောက်ကျောထဲထည့်မထားရင်“ အဲဒါပဲ” လို့ငါ့ကိုပြောတဲ့အခွင့်အလမ်းအမြောက်အများရှိခဲ့တယ်။ ငါပြန်လာပြီ”
အဲဒီအချိန်ကအသက် ၁၇ နှစ်မှာကျွန်တော်ဟာများစွာသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအဲဒီအချိန်ကညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမသိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်တော့် ED ဟာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်ငါ့ရဲ့ ED ကိုစွဲစွဲလမ်းစေတာကြောင့် ငါ 17 ပတ်ကြာနွေရာသီအိမ်ခန်းသို့မိသားစုခရီးစဉ်သို့သွားသောအခါငါ၌မည်သည့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမှမကြည့်ရှုခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ ! ၁၄ ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာရုတ်တရက်ကျွန်တော့်မှာပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ထာဝရတည်တံ့နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အော်ဂဇင်တစ်ခု (ငါအရင်ကမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခု) အတွက်စိတ်ကူးတစ်ခုတည်းနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြproblemsနာမရှိဘူးဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။.
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့်မျက်လုံးဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းထိုအချိန်ကတည်းက porn ကိုရပ်တန့်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီး ၁၄ ရက်ကြာကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှမရဖူးသော်လည်းယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်နှင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာဖြစ်ခဲ့ပြီဟုယခုငါသဘောပေါက်ပြီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြန်ရလာပြီးအပျိုစင်ဘ ၀ ကိုဆုံးရှုံးတော့မယ်။ ငါတိုက်တွန်းချက်ထွက်လာသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အခါတိုင်းဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးငယ်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူနှင့်သင်ယောက်ျားများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။
ငါအသက် ၁၅ နှစ်မှာလိင်မှုကိစ္စစတင်လှုပ်ရှားလာတယ်။ အဲဒီတုန်းကဘယ်သူ့ကိုမှငါမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မမှာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကအချစ်ရည်းစားရှိခဲ့ပြီးကျွန်မတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေ့အထိငါ၌အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့အရာရာတိုင်းဟာငါတို့နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးကျွန်မအတွက်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့တယ်။ ဤအချိန်လောက် (လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်က) ညစ်ညမ်းသည့်ရုပ်သံလိုင်းများသည်သူတို့၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုညွှန်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ငါ porn ကိုကြည့်နေတဲ့တစ်နာရီနာရီကြာအောင်စွဲလမ်းနေတယ်လို့မထင်ဘူး၊ ငါတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ ၃၀ - ၄၅ မိနစ်ကြာလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့တာကမကြာခဏမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်ကိုသတ်သေခြင်းကကျွန်ုပ်သည် porn ပေါ်တွင်မှီခိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတစ်ကြိမ်လျှင် ~ မိနစ် 30 အဘို့, တစ်ပတ်လျှင်အကြမ်းဖျင်း 45 ကြိမ်, တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်, ဗီဒီယိုများမှတဆင့် shuffling, PMO လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အချို့သူများကဲ့သို့မပြင်းထန်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်အင်္ဂါမတည့်သည့်လိင်စိတ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါကအသက် ၂၀ ပဲရှိသေးတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ED ကိုပထမဆုံးတွေ့ဖူးတဲ့အချိန်။ ငါ (တစ်နေ့လုံးမွေးနေ့ပဲ) တစ်နေ့လုံးသောက်ခဲ့ပြီးပြီ (ဒါကိုထပ်ပြီးထပ်ထည့်လိုက်သည်) ။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာထပ်ကြိုးစားကြည့်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုငါကြောက်လို့ပါ။ ဇာတ်လမ်းသွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝ၏နောက်လေးနှစ်သည်သာမန်သာမန်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ငါမိန်းကလေးများအတွက်တက်နိုင်ပေမယ့်ကွန်ဒုံးတင်ထားရန်အဆောတလျင်ခဲ့ရတယ်, ငါသည်လည်းတကယ်တော့ငါမိန်းကလေးအသစ်တစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သို့မဟုတ်သူမနှင့်အတူညဥ့်အခါတိုင်းအလွန်အမင်းခံစားမိမဟုတ်ခဲ့
ငါ PMO4- တစ်ပါတ်5ကြိမ်ဆက်လက်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်။ လိင်မှုကိစ္စမရှိခြင်းကိုအရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ငါဒီအရာအားလုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးပြီ။ ငါဟာတိုးတက်မှုတစ်ခုတွေ့ခဲ့ပေမယ့်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူဖို့နီးပြီမဟုတ်။ reboot လုပ်တဲ့အကြောင်းသိပြီးတဲ့နောက်မှာစမ်းကြည့်ပါ့မယ်။ ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်အချို့ကိုကျွန်တော်တွေ့ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၀ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စသည်တက်ကြွစွာကျဆင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလတ်တန်းစားကာလအတွင်းရှိသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်အချို့သောနေ့ရက်များသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ထိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်သည်။ ငါပိုပြီးလုံ့လရှိသူနှင့်နာမငြိမ်ခံစားရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ် manic ခံစားရတယ်, ဒါပေမယ့်သူကလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူရပ်တန့်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လုံးဝချိတ်ဆက်ရန်လှည့်စားခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်ပထမဆုံးလိင်အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ ငါသူမရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမူးမှယိုယွင်းနေတာပေါ့။ ကျွန်တော်အသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းကခံစားခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အိုးနှင့်မိန်းကလေး Tina Fey ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါAprilပြီလကစပြီးဂျာနယ်တစ်စောင်စတင်ခဲ့တယ်။ 3rdပြီလ ၃ ရက်ကစပြီးငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး၊ တစ်လပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာ reboot ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအဆင့်မြင့်တက်လာပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကနည်းနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။
မကြာသေးမီကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဖူးပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကွန်ဒုံးတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်ပြproblemsနာများရှိခြင်းကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုတော့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ (ဖြစ်နိုင်ချေရှိသလော) သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ထိမိသောထိုးနှက်မှုနှစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။ သူမလုပ်ခဲ့သမျှမှာကျွန်ုပ်ဒစ်အနီးတွင်ရှိပြီးသူမ၏ထိတွေ့မှုကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးမည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုကျွန်ုပ်လုံး ၀ စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှုပိုမိုရှိလာပြီးပြန်လည် reboot လုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိသည်။ သေချာတာပေါ့၊ ကွန်ဒုံးပြissuesနာမရှိဘူး၊ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး၊ လိင်ဆက်ဆံတယ်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်သူမ ထပ်မံ၍ လိုချင်သည်။
ငါလုံးဝပြန်ရောက်လာပြီဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် ၅ မှ ၇ လအကြာတွင်အခြေအနေများပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရသည်။ အခုတော့ပိုကောင်းလာမယ့်အရာတွေကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အခုတော့ငါအရမ်းပျော်နေပါပြီ။
ငါသည်ဤသငျသညျအထဲကယောက်ျားတွေအချို့ကိုအဆိုပါ reboot အတူနေဖို့ကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြန်လည်စတင်သည်။ လိင်နှင့် PMO အပေါ်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုများ
ငါတော်တော်လေးပုံမှန်အကြောင်းပြချက်များအတွက် nofap စတင်ခဲ့သည်။ ငါ TED ဟောပြောချက်ကိုမြင်တယ်၊ YBOP ကိုလာကြည့်ပြီး၊ ငါ့ ED ပြ+နာတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုပြproblemsနာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကအဆက်မပြတ် fapping ကြောင့်ဖြစ်တယ် (ငါအသက် ၃၆ နှစ်) ။
ဤအချိန်ငါ PMO မတိုင်မီရက်ပေါင်း 40 ခန့်ကြာခဲ့သည်။ (ကျွန်ုပ်ယခုပြန်လည်ချိန်ညှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်က ၄၈ ခုဆိုလျှင်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည်မပြီးဆုံးသေးပါ။ ) reset မတိုင်မီငါအောက်ပါသက်ရောက်မှုကြုံတွေ့:
နှစ်ပတ်အတွင်း, ED ကိစ္စများ၏ပျောက်ဆုံးပြီးနောက်
တစ်နေရာရာတတိယအပတ်အတွင်းအကြောင်းကို5ကာလ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ် flatline
ယုံကြည်မှုတိုးလာသည် (ငါ ED ပိုကောင်းလာသည်ဟုဆိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အိမ်သို့ခေါ်သွားခြင်းနှင့်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုငါစွပ်စွဲခဲ့သော်လည်း)
ဒါကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတစ်ခုတည်းသောအံ့သြစရာတစ်ခုပါ။ ကျန်တဲ့အရာတွေကငါလေ့လာခဲ့တဲ့အရာနဲ့သာမန်အသိတရားအပေါ်အခြေခံပြီးမျှော်လင့်ထားပေမယ့်“ အခုငါဟာလိင်ဆိုင်ရာသံလိုက်တစ်ခု” ကိုအများကြီးလျှော့ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့“ ငါမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာကအမျိုးသမီးတွေကြွက်မျိုးကိုခံစားနိုင်ပြီ!” စူပါပါဝါတောင်းဆိုမှုများမျိုး။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က nofap မှာတစ်ယောက်ယောက်ကမျက်လုံးချင်းဆုံမိတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါကငါ့အတွက်တကယ်မှန်တာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီအချိန်ကာလအတွင်းတော်တော်လေးလိင်တက်ကြွခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ၈ ရက်သို့မဟုတ် ၉ ရက်အတွင်းလိင်မဆက်ဆံခဲ့သော်လည်းကျန်တစ်ချိန်ကတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကျိန်းသေတိုးတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုဆုံးရှုံးခြင်းကိုအစဉ်မပြတ်စိုးရိမ်နေမိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အချိန်ယူနိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးအများကြီးပိုပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဟာကြာရှည်မနေခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းငါနေခဲ့လို့ဒီကိစ္စဟာပြaနာမဟုတ်ပါဘူး လွန်း မကြာမီနှင့်ယခုကျွန်ုပ်သည်အချိန်အများစုအတွက်အချိန်ကုန်ဆုံးအချိန်ကိုရှာဖွေခဲ့သည် (တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်အလျင်အမြန်ထွက်လာခဲ့သော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းမကြာမီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်)
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်တယ်။ ငါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တို့အားမငြိုငြင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီး PMO ကိုတစ်ရက်လောက်လေးကြိမ်လေးကြိမ်ဆက်သွားတယ်။
ငါ့အတွက်ရူးသွပ်သည့်အရာမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက် fapping မှအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မည်မျှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသနည်း။ ငါလိင်ဆက်ဆံသောအခါငါစိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရပြီးပျော်ရွှင်မိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်အလိုဆန္ဒမှာအလျင်အမြန်ပြန်လာသည်။ ငါနေဆဲ "မီး" ရှိခဲ့ပါတယ်။ PMO ပြီးနောက်ငါသည်လည်း (အမှန်တရားကိုပြောရုံသာ) စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုခံစားခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်အလိုဆန္ဒမှာမပြန်ခဲ့ပါ။ ငါ PMO ပိုလိုချင်ပေမယ့်မီးမရှိတော့ဘူး၊ ငါမှာစွမ်းအင်နည်းတယ်၊ လိင်စိတ်နည်းတာ၊ မိန်းမတွေကိုဆွဲဆောင်တာနည်းတယ်၊ စွမ်းအင်နည်းတယ်။
အခုတော့တစ်ပတ်လောက်ကြာပြီဖြစ်လို့အရာရာကသူတို့အရင်ကရှိရာဆီကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းကောင်းနဲ့စတင်ပြန်လာနေပြီ။ PMO နဲ့လိင်ကိစ္စကွာခြားမှုကိုကျွန်တော်တကယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရလို့တစ်နည်းပြောရရင်ပြန်သွားမိလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ PMO ကကျွန်တော့်ကိုတားဆီးနေတယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအထိမရောက်သေးဘူး၊ ငါခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုငါရင်ဖွင့်နေတုန်းပဲ၊ လက်ခံရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်အော်ဂဇင်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအမှန်တကယ်လျှော့ချခြင်းမှမဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ ထွက်လှည့်ငါမှားခဲ့ပါတယ်
ဒီဟာကကြာပြီဆိုတာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တယ်၊ ဒီထပ်ဆင့်ခွဲခြားမှုနှင့်သင်တို့အားလုံးကိုငါအလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်တယ်။ PMO ကြောင့်အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်တို့၌ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးအတော်များများပျက်ပြားသွားသည်ကိုယခုကျွန်ုပ် ပို၍ နားလည်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၆ နှစ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းဘဝရောက်နေသည်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးဆုံးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အဆုံးသတ်တော့မည်ဟုထင်သည်။ တချို့လူတွေကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး သင်၏ကောလိပ်နှစ်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်များ၌ဤအရာကိုစတင်ခဲ့ကြသောယောက်ျားများအားလုံးအတွက်၊ မိမိကိုယ်ကိုကံကောင်းပါစေ။ တကယ်တော့ငါတို့အားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ယူသင့်တယ်၊ တစ်ခါတလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီး PMO ပြmyနာတွေကိုနောင်တရမိလာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတောက်ပတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ အမှုအရာလှည့်ဖို့အချိန်အမြဲရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
TL; ဒေါက်တာ ငါ nofap ရက်ပေါင်း ၄၀ နေခဲ့ပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ လိင်ကကျေနပ်ရောင့်ရဲစေပေမဲ့၊ အဲဒီနောက်ငါလက်ထိုးမိတယ်၊ ပြီးတော့ငါ့လိင်စိတ်ကထပ်ပြီးပျောက်သွားပြီး“ မီး” လုံးဝပျောက်သွားတယ်။ နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာသူပြန်လာပြီ
အနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ပထမ ဦး ဆုံးအရိပ်လက္ခဏာ: ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းမြောက်ခြင်း
မနေ့ကငါ့အ gf စောနှင့်ကံကောင်းတာသူမရဲ့ကာလ, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုလက်နှင့် b-အလုပ်အကိုင်အပေးခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့်ငါ O. မကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောခံစားရတယ်။ မရှိတော့အများကြီးပိုကောင်းသလိုနာကျင်သို့မဟုတ်အဆင်မပြေပေမယ့်အများကြီး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပျော်စရာ။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူပထမဦးဆုံးအကြိမ်သူမ၏နှင့်အတူတကယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။
ငါ PMO'd ကတည်းက 8 ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့အရှည်ဆုံး Streak ဖြစ်ပါတယ်။ ရက် ၄-၇ ရက်အကြာမှာအကြိမ်အနည်းငယ်မလုပ်ဘဲမနေခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါမလိုအပ်တော့ဘူး။ ဝမ်းသာတယ်။ အဲဒါကိုကပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကုထုံးလုပ်ငန်းကိုအဆောတလျင်မလုပ်ချင်ပါ။
ငါဒီမှာတစည်းတင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါဘလော့ဂ် entry ကိုပြုမိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုငါ့အပြုသဘောအတွေ့အကြုံများအချို့ကိုမျှဝေချင်တယ်။ ငါနီးပါးဒီအရာတယ်တယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ခံအနည်းငယ် - လွန်ခဲ့သောနှစ် (ဇွန်လခန့်) ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအဆိုးဆုံး ED အချို့ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံတွေကိုကောင်းကောင်းပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါမှတ်မိတာထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြန်လုပ်မိပေမဲ့တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ပိုကောင်းလာပြီလို့ထင်ရပါတယ်။
ငါသည်ငါ့နောက်ဆုံးထွက် reboot သို့နီးပါး 90 ရက်ပေါင်းလက်ရှိဖြစ်၏။ အစဉ်အမြဲငါထက်ပိုကောင်းခံစားရသည်။
၁။ ငါ reboot လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တုန်းက။ အစဉ်မပြတ်ငါထောင့်များစွာကိုဖြတ်လိမ့်မယ်။ မကောင်းတဲ့အလေ့အထကိုပြန်သွားဖို့ဆင်ခြေတစ်ခုအနေနဲ့တိုးတက်မှုလက္ခဏာတစ်ခုခုကိုငါယူခဲ့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝကြဉ်ရှောင်ခဲ့သောပထမဆုံးကြိုးစားမှုဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းကကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေတယ်။ အရင်တုန်းကအရာအားလုံးပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်အသားအနေနဲ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုကျွန်တော်ယူပြီးလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ မှား ယခုငါနှင့်အရင်ခံစားရသည်အတိုင်းနှိုင်းယှဉ်မှုမရှိပါ။
ဒီ reboot စတင်ကတည်းကငါ orgasms နှစ်ခုသာရှိခဲ့တယ်။ တစ်ခုမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်၏အကြောင်းရင်းနှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုတစ်ခုမှ (ကွန်ဒုံးမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်မနိုင်ရှိမရှိကိုမသိခဲ့ပါ) ။ ငါတစ်ချိန်ချိန်ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ပြန်ရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပြုမိတယ်, ဒါပေမယ့်အခုငါအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း 100 စောင့်ဆိုင်းချင်တယ်, ငရဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်သို့ပြန်ရရန်။
၂ ။ တစ်ခါတလေ Flashbacks တွေရှိပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်ကြည့်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ တကယ်တော့၊ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်၏သဘောသဘာဝကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံ၌ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်မှုကိစ္စ၊ တစ်ခါတစ်ရံ၊ ဤသူတို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းထဲမှာအရူးအမူးစကားတွေမရှိတော့ဘူး။ အလားတူရုပ်ပုံသန်းပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေရန်မတောင့်တတော့ဘဲ၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ငါသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်နာရီတစ်ချောင်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုပိတ်မိခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။
၃။ ကျွန်တော့်ရဲ့တွန်းအားပေးအပြုအမူတွေဟာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ထုအပြင်အခြားကြီးမားသောစွဲလမ်းမှုသည်ကာတွန်းစာအုပ်များဖြစ်သည်။ ငါမှာရုပ်ပြဝယ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး၊ စာဖတ်ချင်စိတ်လည်းနည်းတယ်။ ကျွန်တော့်ရုပ်ပြစာအုပ်တွေရဲ့အနားမှာရှိနေရတာနဲ့အချိန်ကုန်လိုက်တာဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တာပဲ။ ငါမကြာမီငါ့အစုဆောင်းခြင်းရောင်းချခြင်း၏ခါနီးအပေါ်ဖြစ်၏။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုငါဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းကိုစွဲလမ်းနေတဲ့အတွက်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုရောင်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အဲ့တာကပိုကောင်းတဲ့ pastime ဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံမသုံးနိုင်တဲ့တစ်ခုပဲ။
4. ငါမနက်၌ရထားစီး, စိုက်ထူအများကြီးရဖို့စတင်တာပါ။ အထက်ဖော်ပြပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုအပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့မိတ်ဖက်ရှာရန်ငါမစောင့်နိုင်ပါ။
၅။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌အခြားပြtroublနာများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်မှုမရှိဟုခံစားရပြီးပြန်လည်စတင်မှုတွင်စောစောစီးစီးပေါ်လာနိုင်သည့်ယုံကြည်မှုမြင့်တက်မှုမရှိတော့ပါ။ အရင်ကငါခံစားခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအပြုသဘောခြားနားချက်မှာငါစိတ်ဓာတ်ကျသောအခါညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုခံစားရန်အသည်းအသန်ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းတာကိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိဖို့တော့လိုတယ်။
6. chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်နှင့်နောက်တဖန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတင်ရန်တိုက်တွန်းအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူ Oed, ငါ porn ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရဘူး။
၇။ လိင်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်သောအခါ၎င်းသည်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့လူသိရှင်ကြားထွက်သွားတုန်းကအမျိုးသမီးအလှအပကိုသတိထားမိလာတယ်။ ထိုအခါငါရသည့်နှိုးဆော်သံသည်လိင်ကိုတွန်းအားမဟုတ်သည့်ရှုပ်ထွေးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ခြေဆစ်တစ်ဝိုက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘောင်းဘီနှင့်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်တွင်ထားရန်တိုက်တွန်းခြင်း။
ဒါငါအခုစဉ်းစားလို့ရတယ် မျှော်လင့်ဒီတစ်စုံတစ် ဦး ကိုထွက်ကူညီလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုလတ်တလောကြိုးပမ်းမှုမတိုင်မှီ reboot တစ်ခုမည်သို့ခံစားရသည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်သိသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်အက်ဆစ်စစ်ဆေးမှုသည်အချိန်ကုန်လာသောအခါကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါကဖြစ်ပျက်သည့်အခါသင်ယောက်ျားတွေအကြောင်းကြားစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းကိုခြောက်လပတ် LINK -Porn အခမဲ့; ပြန်လည်နာလန်ထူအားဖြင့်ဝမ်းသာပီတိ
လွန်ခဲ့သောသုံးလခန့်ကကျွန်ုပ်ချစ်လှစွာသောဇနီးကိုထိုးဖောက်ရန်လုံလောက်သောစိုက်ထူမှုမရနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာတက်ကြွသောဘ ၀ တစ်ခုလုံးအတွက် ED ဒီဂရီအချို့ခံစားခဲ့ရသော်လည်းလုံးဝအားနည်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဒီအချိန်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်မစိတ်ဓာတ်ကျ၊
ငါစလေ့လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာအချို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြေခံကျကျလေ့လာလိုက်ရင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုခြင်းဟာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအတွက်အမှန်တရားကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကြည့်ဖို့ငါ့အလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တခါတရံငါကတောင့်တခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ခဲ့တာတွေကငါ့ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူစုံလင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါထပ်ခါတလဲလဲ porn နောက်တဖန်ကြည့်ရှုခဲ့ပေမယ့်ငါယေဘုယျအားဖြင့်ကလျစ်လျူရှု။ ငါအိပ်ပျော်စဉ်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ, ငါနိုးတစ်ချိန်ကရပ်တန့်။ ထိုအခါငါဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနှစ် ဦး စလုံးအစ ဦး တည်ဆီသို့, ငါ့ခြောက်ပတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ၌နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာနှင့်အတူလက်ဖြင့် orgasmed ။ ED ဟောင်းပြproblemsနာများသည်ယခင်နှစ်များကကဲ့သို့မကောင်းသော်လည်းအများအားဖြင့်နှစ်ကြိမ်လုံးတူညီကြသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်ရက်ကကျွန်တော့်ဇနီးမရှိဘဲငါးရက်တာအားလပ်ရက်မှာမိသားစုကိုလာလည်ခဲ့တယ်။ မနေ့ကညမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ခရစ်စမတ်အခမ်းအနားတွေအတွက်အတူတူပြန်လာခဲ့တယ်။ ငါဟိုတယ်ကိုရွက်တိုင်တစ်ဝက်နီးပါးတင်ထားတယ်။ ငါတို့နောက်ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့မှာလိင်ဆက်ဆံကြတယ်၊ ငါမှာ ED လုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ interupted ဖြစ်ပေမယ့်မပြီးသေးဘူး၊ အိပ်သွားခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ငါတို့ပြန်သွားပြီးငါမှာ ED လုံးဝမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတော်လေးပျော်သွားတယ်။ ဒါဟာတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
ခံစားချက်အပြောင်းအလဲ၊ သံသယ၊ တဏှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကျွန်ုပ်နည်းတူနည်းလမ်းများဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးတို့အားကျေနပ်မှုရှိသည်။ porn အခမဲ့သွားပါ မင်းကိုချစ်မယ်
ငါရက်ပေါင်း 90 မှရတယ်, ငါသည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဤမျှဂုဏ်ယူခဲ့ဘယ်တော့မှ။ ဒီဟာကကျွန်တော့်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုလို့ထင်ပါတယ် (LINK)
ငါကြိုးစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ ဝါသနာများပြုလုပ်ခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းထက်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်များနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ။ ED မရှိ! ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာပြီးမိန်းကလေးများဆီသို့ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည် nofap နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်ဟုမထင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ပြီးကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်နှင့်ပါ။
ဒါကြောင့်ရက် ၃၀ မပြည့်ခင်မှာပဲရှိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေအားလုံးကိုလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ ရလဒ်ကကျိုးနပ်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင်၏ယုံကြည်မှုသည်၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တကယ်တော့ခက်ခဲခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လှပသောမိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါ ED ကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်ကများစွာသောမိန်းမနှင့်အတူပျက်စီးခဲ့သည်။ NoFap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ shit အလုပ်ဖြစ်တယ်
27 အမ်ငါသည်ငါ့တစ်သိန်းအဆုံးမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအမျိုးသမီးများနှင့်အတူတက်ခြင်း / အရှိန်မြှင့်အတွက်တော်တော်လေးသူကပြောတယ်ကောင်းတယ် (သင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသာဖတ်လျှင်စာပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ တ ဦး တည်းကိုဖတ်ပါလျှင်သင်အပေါင်းတို့သည်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့က်ဘ်ဆိုက် Girlschase.com ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ဂိမ်းအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်) ။ ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကအလုပ်မဖြစ်တော့မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့တစ်နှစ်ကျော်လုံးလုံးကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီမှာလူတိုင်းဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားချက်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိင်မဆက်ဆံတဲ့အခါရက်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုငါအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းပြီးဘဝထဲကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ တကယ်လို့များဒီလိုမဟုတ်ရင်ငါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်များစွာကကျွန်ုပ်သည် porn ကိုလုံးဝရပ်တန့်စေပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်“ porn” အတွေးများရှိတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံလွှဲရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ငါငိုနိုင်တဲ့အတွက်အရမ်းပျော်တယ် ငါဘယ်တော့မှ porn ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူး ဒါဟာ ဦး နှောက်အဆိပ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်စကားကိုထပ် dudes ။ ဤ site ရှိ support system ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်။ ငါခရီးဆုံးခါနီးပြီလို့မထင်ဘူး (ဒီနေ့ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတယ်) ဒါပေမယ့်တကယ့်မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်ကမင်းရဲ့ဒစ်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဟာရည်မှန်းချက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကောင်းကောင်းအမှတ်ရစေပါတယ်။ မည်သူမဆိုတွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်ဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်ပါသည်။
ငါတကယ်ကဒီဖိုရမ်နဲ့တူ, ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ၏နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုကိုပြောပြဂုဏ်နဖြစ်၏။ ဧပြီလ၌ငါဖြစ်စေစီမံခန့်ခွဲ ကို restart ၏ 8 ရက်သတ္တပတ် အကြှနျုပျ၏အခွအေနေကယ့်ကိုအကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအံ့သြဖွယ်ရှိကြ၏။
သို့သော်သြဂုတ်လ၌ငါ porn ကိုကြည့်ပြီးထပ်မံ masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်အခြေအနေကငါ porn နှင့်အတူတစ်နေ့3masturbate ဒါမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါဂုဏ်နဒီ problem.I ကဒီမှာငါ့အတိုးတက်ရေးပါတီတင်ထားတော်မူမည်ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး 10 သီတင်းပါတ်ရပ်နားစေပါ၏အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ananda76111
တစ်ခါတလေကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်တွန်းအားဟာကျွန်မအသက် ၁၄ နှစ်မှာလိုပဲခံစားမိတတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံး ၅၅ ရက်တာကာလအတွင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းထိုကဲ့သို့သောအားစိုက်ထုတ်မှုမျိုးတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ဖူးပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် no-fap ကို ၀ င်ရန်အကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်၏ erectile dysfonction (လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်မတည့်မှုအတွက်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း) ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါကရလဒ်ကောင်းများသည်… http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/14d20mq54/ 2_weeks_9_days_nofap /
ငါလမ်းတစ်လျှောက် relapses နှင့်အတူချီတက်ကတည်းကကတည်းက rebooting ခဲ့ကြရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမနေ့ကဒီမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ ငါဟာပြားချပ်ချပ်ထဲရောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးအစိုင်အခဲစိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုရနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါက Viagra ရဲ့အကူအညီနဲ့ငါတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပါ။
ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်။ ပြားလိုင်းထဲရောက်နေလို့ငါထင်ထားသလောက်မလေးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ကဒီအပိုင်းကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဖတ်ခဲ့တာလား။ မည်သည့်လမ်းမဆိုအလွန်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ပြီး၎င်းသည်နောင်လာမည့်အရာများ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဟေ့ကောင်တွေဒီမှာအောင်မြင်မှုရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုငါအောင်မြင်မှုတစ်ဝက်လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကငါ့ရဲ့ ED ပြproblemsနာတွေမှာအရင်းအမြစ်နှစ်ခုရှိတယ်၊ ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ကနေတစ်ခုနှင့် PIED ကတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲမှာယေဘူယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြcausedနာများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
ယခု PIED အပိုင်းဘီစီသို့သင်သေချာစွာစိတ် ၀ င်စားသည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ Mini reboots ၅ ခုလုပ်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါ5နှင့် 21,21,35,31 နေ့က reboots ပွုပါပွီ။ လောလောဆယ်ငါနောက်ဆုံးပြန်ဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်သောအရာကို၏ 38 နေ့ကကဲ့သို့ (ယခင်ကပြောခဲ့ပေမယ့်အချို့သောလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်) ။ ရိုးသားဖို့, တစ်ဦး PIED ရှုထောငျ့မှ, ငါ 95% ပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူအစွမ်းသတ္တိကောင်းတစ်လမ်းအတွက်စကားမပြောနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ငါစိတ်ပိုင်းအရစီစဉ်ထားသည်ဟုခံစားရသည့်ရက်များ၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်အတွေးများမှစိုက်ထူခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ မတ်တပ်ရပ်။ လှည့်ပတ်သွားလာနိုင်သည်။ ၂ မိနစ်ခန့်ကျသွားနိုင်သည်။ နံနက်စောစောထရန်မလိုသည့်နေ့များတွင်တစ်နာရီ၊ တစ်နာရီ၊ ရက်ပေါင်းများစွာတန်းစီနေရသည့်အချိန်တစ်နာရီသာစဉ်းစားပြီးမနက်ခင်း၌အိပ်ရာဝင်လေ့ရှိပြီးယင်းသည်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားပြီဟုခံစားရသောအချိန်မရွေး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားရဲကဲ့သို့ခံစားမိသည်၊ အမှန်မှာ၊ ချိုချိုသာသာ၊ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်များအတွင်းကမလုပ်ခဲ့ဖူးသောလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားများရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၄၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ ခင်ဗျားထက်နှစ်ပေါင်းများစွာ porn မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အင်တာနက် porn များကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်! ငါမင်းကိုငါပြန်ပြောနေတယ်၊ ​​ဒီမှာလူတွေအများကြီးဟာငယ်ရွယ်ကြပြီးသူတို့ဖြတ်သန်းနေတာဟာတခါတရံအသက်ကြီးသူတစ် ဦး ဦး အတွက်တကယ့်ဖြစ်ရပ်နဲ့အနီးကပ်ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်တယ်။ သတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာသည် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ၃ လတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်မျှော်လင့်ခြင်းသည်အနည်းဆုံးပြောရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်ပုံစံသို့မဟုတ်ပုံသေနည်းမရှိပါ။ ၃ လခန့်ကြာအောင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားသူများအတွက်မူ ပို၍ ကြာနိုင်သည်။
ငါ့အတွက်ငါဆေးကုသမှုခံယူခြင်းသို့သွားပြီး ၂ ပတ်လောက်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထွက်လာသည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုလုံးကိုခံစားခဲ့ရပေမယ့်ငါနှင့်အတူမှီဝဲ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အမျက်ထွက်ခြင်း, ဝမ်းနည်းတယ် etc ။ တစ်လလောက်အကြာမှာငါ flatline ထဲဝင်သွားတယ်။ ဒါကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှမမှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ ငါ့လိင်တံကစွန့်ပစ်သွားပြီလို့ငါထင်ခဲ့တယ် တတိယလကုန်ခါနီးနှစ်ပေါင်းများစွာမှာမတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ခံစားရတယ်။ နံနက်စိုက်ထူခြင်း၊ တစ်နေ့တာအတွင်းအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲစိုက်ထူခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးကကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။
ယခုတွင်ငါသည် ၆ လကြာသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် (၂) ကြိမ်ပြန်လာခဲ့သော်လည်း (တစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်တမင်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၆ လကကျွန်ုပ်နှင့်မတူသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စွမ်းအင်ကပြန်လာပြီ။ ကျွန်မရဲ့ libido ဟာအပြည့်အဝပျံသန်းနေတယ်။ ၀ ံပုလွေများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနှစ် ၂၀ နီးပါးအရှိန်မြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းကိုလုပ်နေကြောင်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
ဆက်သွားပါနှင့်နှလုံးမရကြဘူး။ သင်ခံစားနေသမျှအရာအားလုံးသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သင်သင်တန်းဆက်တက်ပါကသင်ထွက်လာမည်
ED က ၁၂ ရက်အကြာမှာကုန်သွားပြီ
(သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်သည်။ သူသည်လိင်မှုကိစ္စကြိုးမဲ့ပြီးကတည်းကအင်တာနက် porn ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ခြားနားချက်တစ်ခုလုပ်သည်။ )
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တူနီးရှားမှ fapstronaut ပါ။ ဒီအင်တာနက် porn သည်တကယ့်ကိုစိုးရိမ်ဖွယ်ကျိန်စာတစ်ခုပါ! တွန့်ဆုတ်နေဆဲသူများအတွက်အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုသည်မည်သို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်အဖြစ်မှန်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှလိုခဲ့သည်။
ငါဟာအမြဲတမ်းမိန်းမတွေ၊ အတော်အသင့်လူမှုရေး၊ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် porn နဲ့ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်ကအရမ်းကြီးလွန်းပြီး၊ နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ တခါတရံ ၅ ကြိမ်အထိတက်ဘလက်များစွာ၊ ငါ၏ဒစ်သည်မရှိခြင်းနှင့်ငါ့ ဦး နှောက်သည်အရူးကဲ့သို့သောအချိန်အထိနာရီပေါင်းများစွာတက်သည်။
ငါလူပျိုလား မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးကအမြဲတမ်းလိင်မှုကိစ္စကိုတောင်းဆိုနေတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမသွားတော့တုန်းကယောက်ျားလေးကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့အော်ဂဇင်အတုတွေလုပ်တယ်။ တစ်ကြိမ်တွင်သူမနှင့်အိုတစ်လုံးရှိခဲ့သည်မှာကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိသော်လည်းတစ်နာရီအကြာတွင်သူမအိမ်မှထွက်သွားပြီးနောက် PMO ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါ။
ထို့နောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်ရည်းစားပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်တူသည်။ အိပ်ရာထဲတွင်သူမမြူပုံနှင့်တူသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အခြားပုံရိပ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ငါ့ထံမှ, ဒါသဘာဝကျကျ, ED hit ။ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အခြားအချစ်ဆုံးဇာတ်လမ်း၊ ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးကိစ္စကိုရပ်တန့်ရန်မလိုချင်ပါ! ဒါကြောင့်သူမကြိုးစားရင်းနဲ့စိတ်ကူးယဉ်နေတုန်းကျွန်မရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ စိတ်တိုလာတယ်၊ ငါဟာပူဖောင်းတစ်မျိုးမျိုးမှာနေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ED ကပိုဆိုးလာတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တောင်မှမလုံလောက်သေးဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာအဖြေရှာဖို့ YBOP ကိုရှာခဲ့တယ်။ ခရီးစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ကြီးမားသော flatline ငါတနေ့လုံးအိပ်ပျော်သေဒစ်, etc ထက်2နေ့ရက်ကာလအဘို့ horny ခံစားရတယ်ဒါပေမယ့်ငါရည်မှန်းချက်ကိုငါ့မိန်းကလေးမှပြောဆိုသော။ တစ်ပါတ်ပြီးနောက်, ငါ့ရည်းစားကိုမှန်ကန်နောက်တဖန်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သူမကငါ့ကို resensitization ကူညီပေးသည်ရာနှိပ်နယ်ပေးစားလေ၏။ ငါကပိုရက်ရက်သတ္တပတ်ပင်လအတွင်းလိုအပ်စဉ်းစားမိတယ်။
ဒါပေမယ့်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်းအိပ်ရာပေါ်မှာသူထိုင်နေတာ။ သူမငါ့ကိုစနမ်းလာတယ်၊ ငါအရမ်းခက်တယ်၊ ဒါကမတူညီတဲ့စိုက်ထူမှု၊ စိုက်ထူမှုအဟောင်း၊ ကျွန်မတို့ဟာ ED မပါဘဲ၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ သူမကကျွန်မရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ လိင်သည်မြူခိုးမဟုတ်တော့သည့်အပြင်အိုသည်ဝမ်းနည်းမှုသာမကကျန်းမာရေးကျေနပ်မှုကိုခံစားရသည်။
၁၂ ရက်လောက်ကြာပြီးနောက် noFap အရာဟာတကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီ။ အခုဆိုရင်ငါဟာပိုပြီးရှင်သန်နေပြီ၊ ပျော်ရွှင်လာပြီ၊ ငါလတွေအဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုရှိလာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ် (မျှော်လင့်ပါတယ်) ။
ဒါကြောင့်ငါသဘာဝကျကျ PMO ကနေကိုင်ထားစောင့်ရှောက်လျှင်, ဤသည်အဘယ်မှာရှိရာကြည့်ရှုပါ!
71 နေ့ရက်များ Pornfree နှင့် NoFap, ပျောက်သွားမှ စတင်. မရဏဆုပ်ကိုင်
ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမပြုမီငါရက်ပေါင်း 90 စောင့်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ သို့သော် ၇၁ ရက်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုခံစားလိုက်ရ။ ကျွန်ုပ်ရည်းစားဟောင်း၏ကောင်းသောအတွေးများနှင့်အတူထိုင်။ အင်မတန်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည့်အင်အားအလွန်အကျွံမရှိသည့်ပုံမှန်ဆုပ်ကိုင်မှုကို အသုံးပြု၍ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၇၁ ရက်ကြာပြီးနောက်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာစိုက်ထူခြင်းစွမ်းအားဖြစ်သည်။ fap နှင့် porn-free တို့မပါ ၀ င်မီငါ ၅၀% ပင်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းယခုတစ်ကြိမ်မှာ ၈၀-၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲရှိသည်ဟုယုံကြည်နေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်လိင်သို့ကူးပြောင်းနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မရှိသောကြောင့်တိုးတက်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူများကိုလက်မလျှော့လိုက်ပါနှင့်။
NoFap သည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည် - သုံးနှစ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်အပျိုစင်ဘဝ - AMA ဖြစ်သည်
by teflon91183 ရက်ပတ်လုံး
ကျွန်တော့်အကြောင်းအတိုချုပ် - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး PMO ကင်းလွတ်ခွင့်တစ်နှစ်ရှိသော်လည်းအချို့သောပြန်လည်ထူထောင်မှုများရှိသော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်တစ်ချိန်က porn ကိုသာကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်မှစ၍ ED နှင့်အတူပြProbleနာများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်အပျိုစင်ဘဝကို 20-2012 အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်
ပြီးခဲ့သည့်လကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရူးအမူးစွဲလမ်းခဲ့ကြသော်လည်းအရူးအမူးစွဲလမ်းခဲ့ကြရသည်။ ငါမတိုင်မီစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူပြproblemsနာများရှိခဲ့ကြောင်းသူမ၏ပြောပြသည်, သူမနှင့်အတူလုံးဝအေးမြခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်နှစ်ရက်အကြာသူမကငါ့ကို BJ ပေးထားပွီးမှ, ငါ (70% စိုက်ထူခန့်) သူမ၏ရိုက်ထည့်ရန်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ငါ့အံ့အားသင့်ဖို့, ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့!
ဤသည်မှာဝါကြွားဖွယ်ရာရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်အရေးကြီးသောသတင်းစကားသည်ဘယ်သောအခါမျှအရှုံးမပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်ရှိအပျိုကညာများအားလုံးသည် ED နှင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကိုမမှားပါစေအထူးသဖြင့်သင် NoFap ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြုခဲ့လျှင် ငါ့ကို တခါတရံမိန်းကလေးနှင့်အဆင်ပြေရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
Heyo, သင့်အပျိုစင်ဆုံးရှုံးအပေါ် congrats ။ ဒါပေမယ့်ငါဆိုသည်ကားရန်ရှိသည်: သင်သာ fapping မပါဘဲနီးပါးတစ်နှစ်ပြီးနောက် 70% စိုက်ထူရနိုင်ပါလျှင်, nofap ဖြေရှင်းနည်းကသာတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်း ED များအတွက်အထူးကုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းရဲ့ရာထူးကိုအမှတ်ရပြီလို့မထင်ဘူး ငါတွေ့ခဲ့တာကတော့ porn-induced ED ပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့၊ ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပထမဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာခံစားမှုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်တချို့ကြိုးစားမှုတွေအပြီးမှာတော့ငါကပိုပြီးဖြေလျော့လာပြီးအခြေအနေတွေကပိုကောင်းလာတယ်။ ၁၀၀% စိုက်ထူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။ 🙂
စိုးရိမ်စိတ်; မရှိတော့ related Ed ပေမယ် PE related ။ ဘယျအရာ DA HECK !? (self.NoFap)
by Strides743 ရက်ပတ်လုံး
ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့ NoFap ခရီးသို့ 42 နေ့ရက်များဖြစ်၏။ ငါ relapse ရှောင်ရှားအဖြစ် NSFW ဘာမှကြည့်ရှုမျှမျှတတကောင်းစွာလုပ်နေတာနေပါတယ်။ ယခင်ကငါ ED ခံစားနေရပြီး၏အလွန်ကြောက်ပေမယ့်ယခုအမျိုးသမီးတစ်ဦးမိတ်ဆွေဖွဲ့ကျော်လာသောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည် (ငါ့အစိတျအပိုငျးအပေါ်သုည, O) ဝန်းကျင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရူးငါလုံးဝခဲယဉ်းရ။ အဆိုပါပညာရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုင်တွယ်ဘို့ NoFap ဖို့ကျားကန်ဒါ။
ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးမှာငါ 10 စက္ကန့်သားအပေါငျးကြာရှည်ဦးမည်ငါ၏အလာမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံမရသောအခါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်ကြောက်ရှာပါ။ im မျှော်လင့် / ဒီ subreddit ဆုတောငျးလ (ကြောင့်တိုးလာ sensitivity ကိုသို့မဟုတ်သမျှရန်) PE တချို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
TL; DR: နေ့ nofap ၏ 40 နှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦး .. အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 10 စက္ကန့်၌ငါ့ဝန်မှုတ်၏ထိတ်လန့? ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်သင်ယောက်ျားတွေ Rock
32 အမျိုးသား; စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ ED!
အဆိုပါအမြန်ဗားရှင်း: 32 နှစ်အရွယ်အထီး,6နှစ်ပေါင်းလက်ထပ်။ အတိတ်5နှစ်ပေါင်း ED ပြဿနာများရှိခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ် P ကို ​​3 တက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ တစ်ပါတ်အကြာတွင်လုံးဝ fapping တော့ဘူး။2အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းသို့ရက်သတ္တပတ်နှင့်ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မကြည်ညိုနီးပါးညစဉ်ညတိုင်းလိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖြစ်ကြပြီးဒါဟာကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်င့်ကိုအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဝိုး။ ကျွန်မအကြောင်းကိုစပ်စုမိပါတယ်အရာတစ်ခုမှာသူက ED မှထမြောက်ဖို့ငါ့ကိုယူထားပြီးအချိန်ပမာဏကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါကဒီမှာအများဆုံးထက် tad bit မှာအဟောင်းတွေရယ်ကိုသိပေမယ့်ကျွန်မရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်ခဲ့ကတည်းကငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတန်ချိန်ဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းအောက်ကပိုရှည်ပုံပြင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုငါပေးမည်။
ရှည်လျားသောမူကွဲ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်မှာ ၂၀ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ခြေဖနောင့်ကျပြီးသူမကျွန်ုပ်ထိုက်တန်သည်ထက် ပို၍ ပူလာသည်။ ထိုအချိန်ကငါတို့နှစ် ဦး စလုံးကောလိပ်၌ရှိကြ၏။ သူမသည်အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။ လိင်စိတ်ပြင်းထန်မှုရှိသည်။ သူမသည်ချက်ချင်းလိင်ဆက်ဆံလို။ ၊ ကောင်းပြီ… ငါစိန်ခေါ်မှုမှတက်နိုင်ဘူး။ ဒီမှာလူအများစုကဒီအာရုံကြောဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာသေချာတယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီးရုတ်တရက်ပြည့်စုံတဲ့ deflation ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသူမသည်ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ငါ O ကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ခဲ့သော်လည်းတစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုန်များကဲ့သို့တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ (၆ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိ၊ ငယ်ငယ်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ) အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူမကကျွန်တော့်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်ခဲ့လို့ကျမ fap မလိုပါဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တက်ဖဲ့ငါမ ED ဒုက္ခနှင့်အတူတိုတောင်းဆက်ဆံရေး၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူနယ်စပ်ဒေသရက်နှင့် (ဂုဏ်ယူဖြစ် flings မအရှိဆုံးအရာ၏) ပေါ့ပေါ့စိုကျပသို့ခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မရဲ့လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်း PMO တစ်ဦးအဆင်ပြေတစ်ခုတည်းအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဆင်းအခြေချခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသည်ငါ့အနာဂတ်ဇနီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ငါ့အစောပိုင်းကဒုက္ခကိုသတိရငါတစ်နေရာရာမှာသွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်မျှော် PMO တက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာ ပြု. , ကျနော်တို့ကို ပြု. , အဘယ်သူမျှမပြဿနာများရှိခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးကလေးရလာပြီးသူမလိင်စိတ်ကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့တယ်။ သူမသည်အလွန်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောခရစ်ယာန်တစ် ဦး အဖြစ်ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှသူမသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးရိုးစွဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်းသူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမပြုမီတရားဝင်ဘာသာရေးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ကိုယ် ၀ န်ကိုလုံးဝစီစဉ်ရန်မလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးမွေးဖွားမှုကိုချစ်မြတ်နိုးသော်လည်းရိုးသားမှုသည်ပထမ ၂ နှစ်အတွက်ငရဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကုန်တစ်ခုလုံးအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဆူညံနေသော (သို့သော်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောနှင့်လုံးဝချစ်မြတ်နိုးရသော) မွေးကင်းစ / ကလေးငယ်မှအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်မှတ်မိရန်ခဲယဉ်းသည်။
ဤကာလအတွင်းငါ PMO ၏သံသရာလုံးဝချိတ်ဆက်တယ်။ လိင်သည်ရှားပါးသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးမွေးဖွားချိန် ၄ နှစ်အရွယ်တွင်ကလေးနံပါတ် ၂ ကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်သည်လုံးဝမကောင်းပါ။ ငါ M သို့မဟုတ်သူမ၏ M ငါ့ကိုရှိသည်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ငါ PE တွေ့ကြုံခံစားချင်ပါတယ်။ P ၌ကျွန်တော်၏အရသာများသည်အလွန်ရိုင်းစိုင်းစွာစတင်လာပြီးကျွန်ုပ်၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကကျွန်ုပ်အားနှိုးဆော်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကလေး # ၂ ကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်စွာပconိသန္ဓေယူခဲ့သည်။ ကလေးတွေနှစ်ယောက်စလုံးကကြီးတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝဟာသိပ်ကိုကြီးကျယ်လွန်းတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါ့ရဲ့စွမ်းရည်အပြည့်အဝကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုကိုအမြဲတမ်းချည်နှောင်ထားတာကြောင့်မိသားစုကိုအပြစ်ပုံချခဲ့တယ်၊ ငါမျိုးလူရှုပ်သို့လှည့်။
ကျွန်တော့်ရဲ့သဘောထားပြောင်းလဲသွားတာကိုပိုမိုဆိုးဝါးလာတာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါကအရမ်းလူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အစဉ်အမြဲခေါင်းဆောင်မှုရာထူးရှိသည်; ဒါပေမယ့်ငါကအဲဒီဆိုင်တွေကိုငါ့အိမ်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျန်းမာတဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ရာထူးကိုငါရပ်လိုက်တယ် ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ပါ ၀ င်သည့်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ် (PMO မဟုတ်သော) အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီတွင်လေးနက်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ငါအခုတော်တော်ကွဲပြားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ငါကပိုပြီးအားကောင်းလာပြီးငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကလုံးဝဟန်ချက်ညီညီပြီးငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးသူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အသက် ၂ နှစ်အငယ်ဆုံးနှင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော့်ဇနီး၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကြောင့်ပြန်လည်လက်စားချေနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါမဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကသင်၏BrainOnPornကို TED Talks မှတဆင့်ထိမိလဲသောအခါ၊ သူဟာသူပြောနေတာနဲ့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ခဲ့တယ်၊ အိတ်ထဲမှာဖျော်ဖြေဖို့ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြောပြတယ် ငါချက်ချင်းငါ့အမကောင်းသော PMO အလေ့အထကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ငါမစွန့်လွှတ်မီကငါ့ MO အလေ့အထသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်သို့မဟုတ် ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ P အလေ့အထမှာတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်သာရှိသော်လည်း၊ ငါပြောခဲ့သလိုကျွန်ုပ်၏ P အရသာသည်အမှန်တကယ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်မကူညီနိုင်ခဲ့ဘူး - ငါနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော့်ဇနီးကိုပြောပြပြီးသူကတော်တော်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုချစ်ပြီးသူမကိုလိုချင်ကြောင်း၊ သူ့ကိုဆုချသောတိုက်နယ်အတွက်ပြုပြင်တည့်မတ်သောပျက်စီးမှုအချို့ကိုလုပ်ပြီးပြီ၊ ငါလမ်းပြန်လျှောက်ရန်လအနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်ဟုသူမအားအာမခံသည်။ ကောင်းပြီ… ၂ ပတ်လောက်ကြာတယ်
အခုကျွန်တော့်ရဲ့ပိုပူပြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊ ယုံကြည်မှုမြင့်မားမှုနဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးကိုတပ်မက်မှုအသစ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော့်ဇနီးဟာပြည့်ဝစုံလင်တဲ့လိင်ကြမ်းတမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ သူမသည်ညတိုင်းလိုချင်သည် (သူမကလေးများနှင့်အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောနေ့တစ်နေ့မှမဟုတ်ဘဲအိပ်စက်ခြင်းအချို့လိုအပ်သည်မှမဟုတ်ပါ။ ) ၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အမြဲရှက်ရွံ့နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး (ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကပြaနာမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်သည်) ပထမတော့သူမကငါ့ကိုအလုပ်မှာ sexting လုပ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါဟာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့လုံးဝစိတ်ပျက်သွားတယ်။ NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘဝကပိုကောင်းလာပြီ။
Fapping ငါ့အသက်ကို (ရည်းစား) မပျက်စီး
ငါရည်းစားဟောင်းဟောင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါမယူနိုင်တော့ဘူး သူနဲ့တွေ့ခဲ့တာကိုကျော်လွှားဖို့သူနဲ့ကျွန်တော်လပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ငါသူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တဲ့အခါသူကရှက်တတ်ပြီးအသည်းအသန်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုလှည့်ပတ်တွန်းလှန်ခဲ့တယ်၊ သူဟာကျွန်မတို့ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာနာရီပေါင်းများစွာစကားမပြောခဲ့ဘူး။ သူကအရမ်းချိုမြိန်ပြီးကြင်နာတတ်သူပါ။
သူသည်အရာရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့တွင်ရိုးသားစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ နေ့စဉ် ၅ နာရီကြာမာကျောသောမာရသွန်ပြိုင်ပွဲများနှင့်မိန်းကလေးများအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာသို့ဓါတ်ပုံများပေးပို့ခြင်းတို့အတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ငါပြtheနာရဲ့အတိတ်ကိုမြင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုသတိနှင့်ကတိပြုပြီးသူ၏ရုန်းကန်မှုအားဖြင့်သူ့ကိုငါထောက်မမည်ဟုသေချာသည်။ ငါဟာသူကိုယ်တိုင်လေးစားမှုနိမ့်ကျပြီးဆိုးဝါးတဲ့မိသားစုဘဝကြောင့်ဒီခက်ခဲတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုလုံးထဲကိုကျရောက်သွားတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာရည်းစားမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တောင်မနမ်းဖူးဘူး၊ ငါသူ့ကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်။
အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါ။ သူကကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြissuesနာအတော်များများကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသူ၊ ထို့နောက်သူသည် NoFap ကိုစတင်ခဲ့ပြီးနေ့ ၁၂၀ အမှတ်အသားကိုနှိပ်ပါ။ သူပျော်ရွှင်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ် - သူ့အဆင့်တွေကတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာတယ်၊ သူ့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးတက်လာတယ်။ လအတော်ကြာကြာချိန်းတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံကြတယ်။ အမှန်တကယ်လိင်။ ငါအရမ်းပျော်လို့ငိုခဲ့တယ် သူကသူ့စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်၊ ငါသူ့ကိုရပ်တန့်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အရာများသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာခဲ့သည်။ သူဟာစိုက်ထူခြင်းကိုပြန်ဆုံးရှုံးဖို့အထိသူထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ငါတတ်နိုင်သမျှအပြုသဘောထားရှိခဲ့ပေမယ့်ငါဆွဲဆောင်မှုမရှိနှင့်မလိုချင်တဲ့ခံစားရတယ်။ သူကစာသင်ခန်းတွေပျက်ကွက်တယ်လို့ပြောတယ်၊ သူ့မိသားစုဘ ၀ ကပိုဆိုးလာတယ်၊
လွန်ခဲ့သောညအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အတူတူနေဖို့သူ့ဆီလာပြီးသူမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အမေကသူနဲ့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ (သူနေဆဲအိမ်မှာနေတယ်။ သူမအခြေခံအားဖြင့်သူ့အသက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ ဒါကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေစေတယ်။ သူကကျွန်မရဲ့အဆင့်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးငါ့ကိုမုန်းတယ်လို့သူထင်တယ်။ ) သူကသူ့အမေကိုဆူညံစွာငိုကြွေးပြီးအဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့ ရှေ့မီးထဲမှာရှိတဲ့သမင်တစ်ကောင်၊ ငါအဲဒါကိုဖြတ်လိုက်တယ်
ငါသူ့ကိုသိပ်ချစ်နေတုန်းပဲ ငါသူနှင့်အတူနေချင်တယ် ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါမကြိုက်ဘူး
သူ့ကိုငါနေ့တိုင်းထောက်ပံ့နေတုန်းပဲ၊ သူတိုးတက်လာဖို့သေချာအောင်နေ့တိုင်းစကားပြောပါ။ သူနေဆဲရုန်းကန်နေပါတယ်။ သူကမကြာခင်ကုထုံးဆရာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးပုံမှန်အလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့နေစရာနေရာအသစ်ရှာနေတော့တယ်။ ငါရန်ပုံငွေတွေဖယ်ထုတ်ပြီးသူထွက်ခွာပြီးအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေထွက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါသူအသက်ရှင်ဖို့လုံလောက်ပြီဆိုတာသေချာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သူကအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျပြီးငါ့ကိုလန့်တယ်။
ဒီဟာကမင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုဘယ်လောက်ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ သင့်ကိုချစ်သောသူအများစုသည်လိမ်လည်ခြင်း၊ ချစ်ခင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုမဆိုသေခြင်းနှင့်မကိုင်တွယ်နိုင်သည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အစဉ်အမြဲတည်မြဲနေသောအရာများကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုပြောခြင်းကအစွန်းသို့အဆင်ပြေသည်၊ အနည်းငယ်သာ fap လုပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုသာရှိသည် - မဟုတ်ပါ။ မင်းကမင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုပျက်စီးစေရုံသာမကသင်နဲ့နီးစပ်သူအားလုံးရဲ့အသက်ကိုပါဖျက်ဆီးပစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
TL; DR: အဲဒါမထိုက်တန်ဘူး။ မထားနဲ့
ဒီ ish မယုံပါ pied ကအမြဲတမ်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးငါ့ကောင်မလေးနဲ့စိုက်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျမိတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ဒစ်ကဒီနေ့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ၁၆ ရက်။ သူမ ၁၀ မိနစ်လောက်သူမရေချိုးခန်းထဲ ၀ င်သွားတဲ့ဒီ shit ကိုသူမယုံတော့ဘူး။ သူမပြန်မလာခင်အထိငါဘာခက်တယ်ဆိုတာခန့်မှန်းခဲ့တယ်။ ငါတစ်နာရီခန့်စိုက်ထူကျင်းပခဲ့တယ်, လိင်အဘယ်သူမျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရုံငါကဆင်းသွားစေတော်မူသောသဘာဝစိုက်ထူမျှငါဒီမယုံနိုငျသညျ။ ယောက်ျားတွေမထွက်ပါနဲ့
၁ လအစီရင်ခံစာ - ရလဒ်များနှင့်မပျော်နိုင်ပါ
ဟိုင်းကောင်တွေ၊ ငါ ၂၃ နှစ်ရှိပြီ။ ယူကေမှာနေတယ်။ ရလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ငါ့ရဲ့တစ်လတာကိုမျှဝေမယ်ထင်တယ်။
ဒါနဲ့ကိုယ့် NoFap ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမတော်တဆတိုက်မိတော့တာပေါ့။ ငါတနင်္ဂနွေအိမ်အပြင်ထွက်ပြီး ၃ ရက်လောက်နေဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူး။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သူငယ်ချင်းကသူသည်အဲန်အက်ဖ်ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဤထပ်ဆင့်ခွဲခြားမှုအကြောင်းနှင့်နှစ်ပတ်အကြာတွင်နှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်၌ပင်သူသည်အကျိုးကျေးဇူးများမည်သို့ခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ငါဒီနှစ်အစမှာငါ့ရဲ့ရေရှည်ရည်းစားနဲ့ပြိုကွဲသွားတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့နောက်ဆုံးလအနည်းငယ်မှာ ED အချို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ငါ (ကျနော့်အမြင်) ဘယ်တော့မှ porn စွဲလမ်းခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းတခါတရံထိုသို့ပြုခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကငါအလုပ်များခဲ့လျှင်မူတည်။ ကျော်သွားလိမ့်မယ်အဖြစ်ငါ fapping စွဲလမ်းမခံခဲ့ရထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးနောက်သူကအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီးအဲဒါကိုစွဲလမ်းမှုလို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သေးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရေရှည် (၃ နှစ်) ရည်းစားဖြစ်ပြီးနောက် ED အနည်းငယ်ကိုမိန်းကလေးအနည်းငယ်နှင့်တွေ့ဖူးခဲ့ဖူးသည်။ ငါထင်တာကငါ့နောက်ဆုံးမိန်းကလေးကသန္ဓေတားဆေးကိုသုံးတာ၊ ကွန်ဒုံးကိုဘယ်တော့မှမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် NoFap ကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်၊ ဒါကဆင်ခြေတစ်ခုပဲ။ ငါသည်လည်းအခြားဆင်ခြေများ - မိန်းကလေးအပေါ်ခံစားချက်မရှိခြင်း, ပါးစပ်လိင်မရှိ, foreplay ၏မရှိခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့သောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသူတို့လျှောက်ထားသော်လည်း fapping နှင့် porn သည်ကျွန်ုပ်အားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ဒါနဲ့ပထမ ၃ ရက်ကအရမ်းကိုလွယ်ကူတာတွေ့ရတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး၊ ပထမ ၅ ရက်အကြာမှာငါ (အနိမ့်ဆုံးထင်တယ်) ပြားချပ်ချပ်စလုပ်ခဲ့တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင် fap (သို့) လိင်ဆက်ဆံရန်သိသာထင်ရှားသောဆန္ဒများမရှိခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါ Flatlining စတင်ပြီးနောက်, လုံးဝ fapping လေပြေဖြစ်ဟန်နှင့်ငါတကယ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ် racked ။ ငါဟာပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လာတယ်၊ ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိလာတယ်၊ ပိုအားတက်လာတယ်၊ ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပိုလုပ်လာတယ်။ ထို့နောက်ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့်3ရက်အတွင်းငါလွယ်ကူသော mode ကိုကူးပြောင်း။
အခုငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးစုံတွဲစုံတွဲတွေကတည်းက ED ကိုတွေ့ဖူးတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ရင်ဒီမိန်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ပူမိတယ်။ သူမမှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။ ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာငါနောက်မှခက်နေတုန်းပဲ။ မကြာခင်မှာပဲထပ်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် ED ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး NF လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ဒါတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါခဏတာဒီလိုလိင်ဆက်ဆံမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ (ကွန်ဒုံးနဲ့လည်းမကိုက်ဘူး) ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် fapping သည်သင်၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုယခုငါတကယ်ယုံကြည်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ လိင်မှုကိစ္စသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်အကြာအထိကြာသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ fapping ဖြစ်တဲ့အခါ၊ ၅ မိနစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိအခက်အခဲတွေ့နိုင်ပြီးညာဘက်ကိုရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို O မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကိုင်ထားလေ့ရှိတယ်။ အပိုင်း ဗီဒီယို၏။ ဒီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခု (အထူးသဖြင့်သင်ကြည့်တဲ့ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစား - ငါအတော်လေးပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့ဖူးပေမဲ့) နဲ့ကွာခြားတာကမင်းကိုလိင်စိတ်မပျော်အောင်မလုပ်နိုင်တာကိုတကယ်ရပ်တန့်စေနိုင်တယ်။
အခုတော့တစ်လကျော်သွားပြီ။ ရလဒ်တွေနဲ့မပျော်နိုင်တော့ဘူး။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတကယ်မြင်နေရတယ်။
ပထမဦးစွာ3ရက်ပေါင်းလွယ်ကူသောခဲ့ကြသည်။ ငါလွယ်ကူသော mode ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာနေ့ 23 သည်အထိ Flatlined ။ Fixed ED လိင်ခံစား, အသက်ရှင်ခြင်းကိုခံစား, အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်။
ရက်သတ္တပတ် ၃ နှင့် ၄ မှအနိမ့်ပိုင်းသို့ရောက်ပြီးနောက် ၉၀ ရက်တစ်ဝက်လောက်နီးပါးနီးကပ်လာနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် (မိန်းကလေးတစ် ဦး အားအကြိမ်များစွာအိပ်ရာခင်းခြင်းဖြင့်ပြrelatedနာများမရှိဘဲ (porn နှင့်ဆက်နွယ်ပြီးနောက်) ပြီးခဲ့သည့်ညကအနည်းငယ် yrs များအတွက် ED) ။ ပထမ ဦး ဆုံးအလှည့်လည်လျင်မြန်စွာအဆုံးသတ်; တည်ဆောက်မှု၏ ၃၈ ရက်သည်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းကျည်များသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးခဏကြာခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုအခုအချိန်မှာ brimming နှင့်ကျွန်မဘဝအပေါ်အပြုသဘောအလားအလာရှိသည်။ ငါစိန်ခေါ်မှု၏ဒုတိယတစ်ဝက်မျှော်လင့်!
ဟေးယောက်ျားတွေ, Im နီးပါး nofap ၏ 4-5 လအကြာကာလအတွင်း fixed ခဲ့တကယ်ကိုလေးနက် ED ကိစ္စများနှင့်အတူလူငယ်တစ်ကောင်လေး။ သို့သော်3ရက်သတ္တပတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မယခုစိတ်ဓာတ်နှင့် flatlining ဖြစ်ကြောင်းကို, ကျောသုညမှစိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်စိတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ (4 သို့မဟုတ်4faps) fapping ၏အကြောင်းကို5ရက်ပေါင်းပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ is- ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အဖြစ်တာရှည်ယူပါဘူး, ငါ၏ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခန့်မှန်း? ငါ၏အဦးနှောက်ကိုအမြဲဤမျှလောက်သည်အနာပျောက်စေသောအလွန်လျင်မြန်စွာပြု ပြင်. ရနိုင်ကြောင်းအမြန် desensitization ဒါဖြစ်ပေါ်နိုင်ဆက်လက်တည်ရှိကြမည်နည်း အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်တစ်စုံတစ်ဦးကဒီအပေါ်အတွက်အလေးချိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင် hardmode ပေါ်တွင်သင်၏ထင်ကြသလော
(အသက် ၂၁ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်တိုင်းနှင့်အမြဲတမ်းပြtroubleနာများစွာကြုံခဲ့ရသည်။ ငါ၏အ 21+ လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထဲကနှစ်ယောက်သာငါ့ကိုအပြီးသတ်စေပြီ, သူတို့ကကျနော်တို့ကတွက်ဆနိုင်ရှိရာရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိကြ၏။ ဝမ်းနည်းခဲ့တယ် တကယ်တော့အဲဒီမှာထိုင်ပြီးငါ့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်ပြီးအထွတ်အထိပ်နဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာရဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်မြင်ယောင်ကြည့်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာငါဟာလူပျိုတွေကိုကူညီဖို့ငါ့ကောင်မလေးအလောင်းတွေကိုသုံးပြီးနည်းနေတယ်။
ငါရက်ပေါင်း 90 စိန်ခေါ်မှုပြီးစီးပါပြီ။ သို့သော်လည်းငါ PMO မှရှောင်ကြဉ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိရာတော်တော်လေးရှည်လျား (ငါ့အဘို့) Streak ရှိခဲ့တယ်။ ငါလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ရှိခဲ့တုန်းကဒီအချိန်တွေမှာငါဟာစိတ်ထဲမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာအံ့ဖွယ်ပါပဲ။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အထွတ်အထိပ်နှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု = ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို။ ငါသည်လည်းအတော်လေးလျင်မြန်စွာငါ့စူပါအင်အားကြီးတယ်။ ငါဟာအပြင်ထွက်ပြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးတွေပါ ... ငါလိုခံစားခဲ့ရတာတွေကိုငါ့ကိုပိုပြီးသတိပြုမိလာတယ်။ မျက်စိအဆက်အသွယ်တစ်ခုလွယ်ကူသောအရာဖြစ်ခဲ့သည်။
မနေ့ကလိင်ခဲ့, ကကြီးမြတ်သည် သွား. !
ငါရည်းစားနဲ့အတူ ၂ လနေပြီး PMO ကို ၁ လခန့်ရပ်လိုက်တယ်။ ပထမရက်သတ္တပတ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ libido Flatline .. Awful !! ငါစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ငါ့နှစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ငါပြုပါတော့မည်သောအခါငါကောင်းသောစိုက်ထူရှိခြင်းခဲယဉ်းအခက်ခဲဆုံးပါပြီ။
ကျွန်တော်စိုးရိမ်တကြီးသတိထားမိသည်။ ဒါပေမယ့်မနေ့ကငါမှာစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး၊ သုံးကြိမ်လောက်လုပ်မိတယ်၊ ငါနင့်ကိုမနှောက်ယှက်အောင်လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။ !! ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက်တောင်သူမရပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုတကယ်ယုံကြည်မှုရှိစေပြီးကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့တယ်။
ဒါကကျွန်မရဲ့ ED ဟာ Flatline -> performance anxiety -> flatline မှလာတာကိုသတိပြုမိလိုက်တာနဲ့၊ ငါဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ငါမြန်မြန်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ လွန်ခဲ့သောလကအကြီးအကျယ်တိုးတက်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုသတိပြုမိသည်မှာကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကို panties နှင့်ဒေါက်ဖိနပ်များရှေ့တွင်တွေ့ရခြင်းကဲ့သို့သောစိုက်ထူမှုမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း kinky ပစ္စည်းများသည်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ဆုတ်ခွာရန်ပြproblemsနာများရှိနေသေးသည်။
ငါသညျဤအပြီးနောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ကြောင်းကို!
ခံစားချက် Recovery ကို
လူတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါ။ ငါ Teabag ပါ။ ဒါကကျွန်တော့်လက်သီးဆုပ်ပဲ။
အိုကေ…ငါဘာမျှမတွန့်ဆုတ်ဘဲငါတတ်နိုင်သမျှရိုးသားပါလိမ့်မည်။ ငါဒီမှာအားလုံး post ကိုဖတ်ကြပြီမဟုတ်ဒါကြောင့်ငါဆွေးနွေးရန်ပစ္စည်းပစ္စယအချို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြပေမည်။
ပထမဦးဆုံးအ ..My စွဲစတင်ရန် ok showering စဉ် 15 yrs ဟောင်းတနေ့မှာအကြှနျုပျ၏အိမျပွ im စတင်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင့်တစ်ဦးထုပ်ပိုးပြီးခဲ့သည်။ စအဦး၌
ငါကှကျကှကျကှငျးကှငျးကသတိရပါ။ ကျွန်မနာရီနှင့်မျှမသုတ်ရည်လွှတ်ဘို့အ masturbate ဒါပေမယ့်တစ်ခုစိုက်ထူခြင်းနှင့် arousal ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကလုပ်နေဖို့အသုံးပြုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သဘောပေါက်တယ်တစ်ချိန်ကဖြစ်ပါတယ်
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်။ ယနေ့ငါငါ့အသုံးဆယ်အတွက်ရေချိုးခန်းထဲမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအော်ဂဇင်သတိရပါ။ တကယ်တော့အသေးစိတျထဲမှာသတိရပါ။ ပင်ခံစားမှု။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်အချိန်တွင်ကိုယ်နှင့်အတူတော်တော်လေးလူကြိုက်များခဲ့သည်
မိန်းကလေးများ။ ငါ့မှာလိင်မှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကြိုတင်ပြီးပြောထားတယ်။ ဒီဟာကမိန်းကလေးတွေနဲ့ငါ့အသက်ကစပ်စုခဲ့ပေမယ့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုအားလုံးနဲ့အတူမသွားချင်ခဲ့ဘူး။
ငါ pushy မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ဒီမှာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့အိမ်မှာငါတို့မှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်သံလိုင်းတွေရှိတယ်၊ ပြီးတော့အဲ့ဒီချန်နယ်တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ SO ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဈဖြည်းဖြည်း porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ကိုယ့် masturbated ကပ်ကာလ၏ max ကိုနံပါတ်တစ်တနေ့ထ6ကြိမ်ဖို့ပဲငါအရာ။ ဒါကအားလုံး 18 နှစ်ရှိပြီအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆင်ပြေလား။ လမ်းထွက်ကြောင်းဆည်းပူးတော်မူပြီးမှ။ ကိုယ့်ယခုမိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါ 18 နှစ်အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်။ ငါလိင်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ထို့နောက်စိုက်ထူရှိခဲ့ပါတယ်
ငါ (အရွယ်အစားကဲ့သို့) ယနေ့အဘို့အသတ်လိမ့်မယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါကြင်နာစွာနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ်သက်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ငါ့အတွက်တော့ငါဟာလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကကိုယ့်အတွက်ပျော်စရာတစ်ခုတည်းသောအချိန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်လိင်တံ ဦး ခေါင်းကခံစားချက်မရှိဘူး။ လူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့်ခံစားချက်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိဘဲလိင်ကိစ္စသည်အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်လားဟုတွေးမိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကလိင်ဆက်ဆံစဉ်က၎င်းသည်အပြာအစုတစ်ခုဟုထင်မှတ်ခဲ့သည် နှင့်ငါ porn ရုပ်ရှင်ကား၌ရှိ၏။
ဒါဟာ arousal အချို့ကိုမျိုးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်လည်းကိုယ့်လိုခငျြအခါတိုင်းငါ့ကို ejaculate ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်အားလုံးစဉ်းစားနဲ့ညစ်ညမ်းနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုးကားအပေါ်သို့ ejaculate မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်အရာတစ်ခုခု, ငါ့လိင်တံအတွက်ခံစားချက်နှင့်အတူမှားသဘောပေါက်လာသောအခါဤတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတောများတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အတူပေါ့ပေါ့တှေ့ဆုံခဲ့သညျ။ ငါသူမ၏ထိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း,
လုလင်တယောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကွန်ဒုံးကြိုက်တယ်ဘယ်တော့မှနှင့်အတွေ့အကြုံမိန်းကလေးများနှင့်အတူလိင်ခဲ့ရပြီးကိုယ့်သူမ၏ထိုးဖောက်ဖြင့် STD ကျုံ့ (ကြောင်းကိုထိုလုလင်သည်အကျွန်ုပ်ကို) ကန့်သတ်မယ့်မီတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့
ငါအပူခံစားခဲ့ရကြောင်းကိုယ့်ရှေ့တော်၌ခံစားခဲ့ရတစ်ခါမျှတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပြင်းထန်သောနှင့်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုသူမ၏အတွင်းပိုင်း ejaculating မဟုတ်ထံမှရုံကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ငါနောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိ
အဘယ်သူမျှမပြန်လာ၏အမှတ် (သင်လွှတ်သင့်ရဲ့အဆင်သင့်သိကြသည့်အခါသင်ကလစ်ခံစားချက်ကိုသိ) ။ ကိုယ့်အပျိုစင်ဘဆုံးရှုံးခဲ့ရကဲ့သို့ငါ့ကိုကခံစားရတယ်။ ဒါဟာမြန်ဆန်ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီး
ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏သီးခြားနည်းလမ်းတွေထွက်ခွာသွားလေ၏ပြီးနောက်။ ငါနေဆဲငါ့အလိင်တံခေါင်းကိုအပေါ်သူမ၏အာရုံခံစားရနိုင်ကြောင်းခရီးသွားနေစဉ်ဒီတော့ရေချိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဤသည်လိုက်တယ်ခဲ့သည်
ဒါပေမယ့်သူကဘယ်လောက်ကြီးမြတ်ငါ့ကို ..to ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ TO သို့ငါထပ်မံခံစားရတယ်ဘယ်တော့မှရှိသည်။ ငါပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများစွာရှိခဲ့ဖူးသည်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထွတ်အထိပ်မှအလွန်ရှည်လျားကိုယူကွောငျးသိရ nothing.They ခံစားရအတွက်မရှိမဖြစ်သော။
ငါ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းပြီးခဲ့သည့် 12-15 နှစ်ပေါင်းတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်တခါတရံ ejaculated ပါပြီ။ ငါနောက်ကျောခံစားနိုင်အောင်ကိုယ့် porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချင်သောဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာငါကခက်ခဲမတှေ့ခဲ့တယျ။ ကိုယ့်တစ်လနီးပါးလောက်ရပ်လိုက်ပြီ ဒါပေမယ့်အရင်တုန်းကငါ့ကိုရပ်တန့်ခိုင်းတာကတစ်လလောက်ပဲလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြန်ရသွားတယ်။ ငါဘယ်လောက်ချိုသာနေတာလဲ
Masturbate ရန်။ အမှတ်သည့်ဈငါအမှန်တကယ်ချွတ်ရမယ့်အစားကိုကြည့်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကနေအမျိုးသမီး၏စပ်လျဉ်းအသုံးပွုနိုငျနှိုးဆော်ခြင်းရ porn မလိုအပ်ခဲ့ဘူးသော်လည်းဤတွင်ခြားနားချက်ဖြစ်တယ်
သူစိမ်းလိင်ရှိသည်။ ငါ၏အလိင်တံခေါင်းကိုအတွက်ခံစားမှုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားနှင့်ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ခံစားရတယ်။ ကျွန်မထိုခဏခြင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုခံစားမိနိုင်ဘူး။ ငါသည်လည်းငါ၏အမိမိကိုယ်ကိုစုံစမ်းပြီ
ကိုယ့်ကိုငါ့အသစ်နှင့်အသစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ၊ ကြည့်တာတောင်မှဆန္ဒမရှိဘူး။ သူကငါ့ ဦး နှောက်လိုပြောတယ် ... မင်းကဒါကိုနောက်တဖန်မလိုတော့ဘူး၊ ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပုံတစ်ပုံပဲမြင်ရရင်တောင်မှအဲဒါကိုမနှိုးဆွနိုင်ဘူး။ ငါ့ကိုအဟောင်းကိုညာဘက်ငုပ်ကြလိမ့်မယ် ငါဟာတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းလှပေမဲ့တကယ်တော့ငါ့အတွေးတွေကစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကမဟုတ်ဘဲ။
ငါပျက်စီးမှု၏နှစ်ပေါင်းများစွာပြုပြင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်မှာ im လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ရရှိရာအဘယ်သူမျှမရှိသည်ထင်မစဉ်းစားပါ။ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်သိပေမယ့် ... ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ် ...
ဟုတ်သည်။ ဒါကစာသားအတိုင်းပဲငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ အောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမဲ့ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနေတုန်းပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်ကစာသားအတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးကတည်းကအကြံဥာဏ်ပေးတာကိုမိုက်မဲတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်တူညီသောပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်အထူးသဖြင့် ED နှင့်အထူးသဖြင့် porn နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားမရှိခြင်း။ ငါ့ကို (စာသားပြfixedနာတစ်ခုလုံးကိုဖြေရှင်းသကဲ့သို့) ငါ့ကိုကူညီသောအရာ porn မပါဘဲနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံခံစားမှု၊ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်သောပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်လိုချင်သမျှကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ထိုနို့သီးခေါင်များထဲသို့ပွတ်သပ်ပြီးသင်၏မြည်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုနစ်မြုပ်စေလျှင်၎င်း။ သင်သည်ဤအရာကိုကြိုးစားပြီးလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊
အခုငါ lotion ကိုသုံးပြီးသေချာသလောက်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးထွားမယ့်အစားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တယ်။ ငါသည်လည်းငါ့မျက်စိကိုပွင့်လင်းစွာနှင့်မျှမျှတတစောင့်ကြည့်လျက်ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ကိုငေးကြည့်နေသည့်ထူးဆန်း၊ မိုက်မဲမှု၊ ငါဆိုလိုသည်မှာတောက်ပနေလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေပြီးမိန်းမအချို့သို့မဟုတ်ငါစဉ်းစားနိုင်သည့်ဇာတ်လမ်းအပေါ်မဟုတ်ပါ။ ငါ ၂ ပတ်လောက်ကြာအောင် (ငါတစ်နေ့ ၁ ရက် ၁ ကြိမ်လုပ်တယ်၊ ၂ လုပ်တယ်၊ ဘာမှအရေးမကြီးဘူးမသေချာဘူး) လုပ်ခဲ့တုန်းက ED ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးငါ့ရဲ့လိင် drive ကိုခေါင်မိုးပေါ်လျှောက်သွားတယ်။
အခုငါ့မှာတစ်ခုတည်းသောပြpornနာကညစ်နေတယ် ငါအစကန ဦး ရလဒ်များကိုစတင်မြင်သောအခါငါတကယ်မမှတ်မိပါဘူး, များသောအားဖြင့်ဒါဟာငါ့နောက်ဆုံးညစ်ညမ်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အသက်ရှည်မှုအပေါ်မူတည်။ ၅ ရက်မှ ၈ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ ED နှင့်လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုတိုးတက်လာသည်ကိုစတင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဝေးဝေးနေနိုင်သည့်အချိန်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမြဲတမ်းအကျိုးရှိသည်။ မေးခွန်းများ / မှတ်ချက်များ / whatevers နှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်သို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
သို့တိုင် Masturbating စဉ်မှာ Porn သွေးဆောင် ED ကုသ
26days = အစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးလိင်အချို့!
ကျွန်မအသက်အရွယ်အဘို့အချိန်ပဲတစ်ပါတ်သွားပြီးနောက်ယခု 26 ရက်ပေါင်းသွားပြီတော့ကောင်းပြီ, ငါ porn စတိုင်လမ်းအတွက်အံ့သြဖွယ်, 8 လငါ၏အ gf နှင့်အတူအချို့သောအံ့သြဖွယ်လိင်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အလွန်စိတ်ခံစားမှုမေတ္တာရှင်တို့နှင့်ကြီးသောခံစားပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုံကောင်းသောခံစားခဲ့ရ4ပိုပြီးပုံမှန်ခဲ့ကြသည်, သူတို့ထဲက2အံ့သြဖွယ်ခဲ့ကြသည်, ယခုသီတင်းပတ်လိင်2ကြိမ်ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘယ်နေရာမှာဟာအံ့သြဖွယ်လိင်ထဲကလာသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်တကယ်ကကျနော်သေချာပါတယ် porn ၏မရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုသူကမအလွန်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် gf ထင်ခဲ့ဘူးသိချင်ပေမယ့်ရှိသမျှကိုပိုကောင်းစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ခဲ့တာ Nope, gf ။ ဒါကြောင့်အခွံမာသီးရှေးရှေးအတွက်ကန် porn ဆက်ကြိုးစားပါ!
ကြီးမြတ်ရလဒ်များကို (ရှည်လျားသောပို့စ်) နဲ့ 30 နေ့ကအစီရင်ခံစာ
အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော (၈) နှစ်လုံးလုံးမသိနားမလည်ဘဲညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုခံခဲ့ရသည်။
ငါအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစစလေ့လာခဲ့တယ်၊ နေထဲမှာနေရောင်ခြည်သုံးသတင်းစာတွေကနေတနင်္ဂနွေသတင်းစာတွေမှာအလင်းလှုံ့ဆော်မှုကိုသုံးတယ်။ ဒါကအပတ်တိုင်းငါ့ခေါင်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့လုံလောက်တယ်။
ငါတက္ကသိုလ်သို့ Playboy မဂ္ဂဇင်းအနည်းငယ်နှင့်အတူ ဦး ဆောင်ပြီးသည်နှင့်အခြေအနေများပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်အင်တာနက်သည်ကြီးမားလွန်းနေဆဲမဟုတ်ပါ၊ dial-up connection အဟောင်းဖြင့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲမှုမရှိသောကြောင့်အများအားဖြင့် softcore ဓါတ်ပုံများနှင့်ပုံများကိုကြည့်သောအခါစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ ထိုနည်းတူစွာပင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုယခုအချိန်တွင် desktop စက်ဖြင့်သာရရှိနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌အပတ်တိုင်းအကြိမ်အနည်းငယ်သာကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုများကိုစတင် download လုပ်နိုင်ချိန်တွင်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းအစကတစ်ပတ်လျှင်အကြိမ် ၂ ကြိမ်သာဖြစ်နိုင်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်မျှသာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်အသက် ၂၉ နှစ်မှာအလုပ်ပြောင်းပြီး၊ ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ခန်းကိုဝယ်ပြီးတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့တယ်အထိဒီဟာဆက်လုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ အိမ်ပြန်ရန်၊ တံခါးပိတ်ရန်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဖြင့်နှစ်မြှုပ်ရန်သွေးဆောင်မှုသည်များလွန်းလှသည်။ ဒီစွဲလမ်းမှုဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာငါလုပ်ချင်တာပဲ။
ငါတကယ်အလုပ်များသောအလုပ်ရှိပြီး 10 နာရီကြာပြီးနောက်အိမ်၌နေလိုသောကြောင့်လူမှုရေးဘဝနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လိုက်တာကမိနစ် ၉၀ ကြာတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးစုံနဲ့အတူအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ငါဟာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုအော်ဂဇင်မဖြစ်တော့ဘူး။ မိန်းမမျိုးစုံလိုချင်တယ်။ အိုင်ပက်နဲ့အိုင်ဖုန်းတွေရောက်လာတာကအခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်လောက်မှာပေါ့ပေါ့ပါးပါးကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပြီးသူတို့ထဲကတစ်ယောက်မှငါ့ကိုမလှည့်ခဲ့ဘူးဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ် - ငါဟာ 'သေပြီ' ဖြစ်ပြီးရံဖန်ရံခါငါဟာလိင်တူချစ်သူလားဆိုတာကိုတော့မေးခွန်းထုတ်လာတယ်၊ လိင်တူချစ်သူ porn မဆိုကြင်နာမှာ။ အဆုံးမှာတော့ငါကစိုးရိမ်ပူပန်မှု (သို့) အရက်ကိုလျှော့ချပြီးပုံမှန်လုပ်လိုက်တယ်။
လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်က၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ဘောင်းဘီကိုနှစ်ခြိုက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စရပ်များကိုပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့သည်။ ငါသူမနှင့်အတူရှိနေပြီးတစ်နာရီကြာသေဆုံးနေသောဒစ်ကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါသူမအလွန်စိတ်ပျက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုသူမကြိုက်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းအမှန်တရားနှင့် ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ ဒါကပြသနာကဘာလဲဆိုတာငါသိဖို့လိုတဲ့တွန်းအားကိုပေးတယ်။ ပြီးတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ကမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက်အကုန်လုံးနှိပ်လိုက်ရင်ငါပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိတယ် - ငါက PIED ပါ၊ ဘယ်လိုဒီရောက်ခဲ့တာလဲ
လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်ကနောက်ဆုံးသော 'dick dead' အတွေ့အကြုံမှကျွန်ုပ်သည် 'porn သည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ' စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ပြီးရက် ၃၀ အတွင်းကျွန်ုပ်၏လမ်းအတိုင်းပြန်ရန်ဆန္ဒမရှိပါ။ နောက်ဆုံးစိတ်ဒဏ်ရာအတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်ကိုပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံရန်ကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုကနေနိုးလာပြီးအိပ်မက်ဆိုးကိုမက်ပြီးအိပ်မက်မက်နေသလိုခံစားရတယ်။ အဲဒါကိုကျော်လွှားပြီးအသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
PMO မရှိသောတစ်ပတ်၊ နှစ်၊ သုံးပတ်လုံးသည် ၂၁ ရက်လုံးလုံးအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ ငါတစ်လျှောက်လုံးတော်တော်လေးရွားလှခံစားခဲ့ရပေမယ့် porn ကိုကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူး။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါဟာ 'porn သည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ' စိတ်ဓာတ်ကိုအစကတည်းကရှိခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူမဟုတ်တော့ဘူးဟုပြောခဲ့သည် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုငါအာရုံစိုက်ပြီးအာဟာရထဲကိုထည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပစ်ချလိုက်တာပဲ။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာက porn ဟာကျွန်တော့်ရဲ့အလုပ်ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒါကကောင်းကောင်းတိုးတက်နေပါတယ်၊ ကျွန်တော်အမြဲပုံမှန်လေ့ကျင့်ပြီးအားကစားကိုကစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် porn ကငါ့ ဦး နှောက်နဲ့အလားအလာကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ဆိုတာသတိမထားမိဘဲငါမှတ်မိနေသမျှကာလပတ်လုံးဆက်ဆံရေးကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်။
ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်ကစပြီးငါအံ့သြသွားတယ်။ ဦး နှောက်မြူခြင်း၊ နှစ်သစ်ကူးခါနီးပြီ၊ ငါလိုချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ် - ကမ္ဘာဟာငါ့ရဲ့ကမာပဲ။ ဤရက်သတ္တပတ်၏ပထမနေ့သည်ကျွန်ုပ်သည်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အဓိကစျေးဝယ်စင်တာသို့သွားသည်။ ငါမုန်းတာကရောင်းအားလက်ထောက်တွေအားလုံးနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရတာကိုကြိုက်တယ် ငါနေတဲ့နေရာကိုကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးယောက်ကသူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါကဒါကိုစိတ်ကူးယဉ်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတော့သေချာတယ်။ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ နေရာတကာမှာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါ။ ငါအသက်ရှင်တာခံစားရတယ်၊ အရင်ကထက်ပိုပြီးခံစားရတယ်။
ရက်သတ္တပတ်လေးရက်၊ သုံးရက်နေ့တွင်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများဖြင့်ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်ချိုနေပါသည်။ အပြာကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမကြည့်လိုပါ၊ သို့သော်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူနေလိုသောဆန္ဒသည်အရသာ၊ အနံ့နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေခြင်း၏အလုံးစုံအတွေ့အကြုံ၌ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်မြှုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏သွားများကိုကြိတ်ခြင်း၊ သီချင်းအချို့နားထောင်ခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။
ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်အတွင်းတွင်ပြောမည့်နံနက်ခင်းသစ်ပင်တစ်ပင်မျှသာမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၅၀ မှ ၈၀% သောစိုက်ထူခြင်းနှင့်ယခုနိုးနေပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဟာနိုးကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိခဲ့ပါဘူး၊ အနည်းဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကပါ။ အကြှနျုပျ၏ flaccid လိင်တံလည်းအကြီးလှပါတယ်။ ပိုကြာကြာဆွဲထားပြီးချောချောမွေ့မွေ့ခံစားရသည်။ ငါရလဒ်အဖြစ်ပိုပြီးသူရဲခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်အသံကလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ ၂ ခုကိုလည်းကျဆင်းသွားသည်။
အရာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှငါထပ်ပြီးတင်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အကြာမှာကျွန်မရဲ့အကြံပေးချက်က PMO မပါဘဲသင်သွားခဲ့တဲ့ရက်အရေအတွက်ကိုအာရုံမစိုက်ဖို့ပါ။ ဆိုလိုတာကရက်ပေါင်း ၃၀၊ ၆၀၊ ရက် ၉၀ ထိအရင်အခြေအနေတွေဆီပြန်သွားတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲ။ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကသင်ထိမိတဲ့အခါစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ မင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်ဖို့နဲ့မင်းနေ့တိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးအခုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝါသနာပါရာများနှင့်စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်းနှင့်လူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်အချိန်အနည်းငယ်ပေးရန်အချိန်ယူပါ။ နောက်ပြန်မကြည့်ပါနှင့်ဂဏန်းကိုအာရုံမစိုက်ပါနှင့်။
အစဉ်မပြတ်ငါလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အားကစားကစားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့် PMO မပါဘဲငါအပတ်တိုင်းအားကစားရုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင်းဆုံးနှိပ်ပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အောင်ငါ။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဝါသနာပါရာများကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်၏လက်၌အချိန်ပိုများလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အဲဒါဟာမမှန်ဘူး၊ မင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းရဲ့လက်ထဲမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြုန်းတီးပစ်နိုင်တယ်။ အခုနိုးပါ။ နိုးပါ။